Myanmar 18 Plus: ဒဂုံမန်း ရထားပေါ်က အန်တီမမ
ဒဂုံမန်း ရထားပေါ်က အန်တီမမ
ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က အစိုးရ ဌာနတခုက အရာရှိပေါက်စလေးပါ။ ၇န်ကုန်မှာသင်တန်းတက်ပြီးတော့ တာဝန်ကျရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းက မြို့လေးတမြို့ကို အသွား ဒဂုံမန်းရထားနဲ့ အထူးတန်းလက်မှတ်သွားယူတာ လက်မှတ်က ကုန်နေလို့ တနေရာကျန်တဲ့ အိပ်ခန်းတွဲက လက်မှတ်တစောင ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်နေ့ညနေ ရထားစီးဖို့သွားတော့မှ သိရတာက ဒီတွဲက ရှယ်ကြီးဗျ။ ရထားတတွဲလုံးကို
၄ ပိုင်းပိုင်းပြီး တပိုင်းကို တခန်းစီလုပ်ထားတာ။ တခန်းမှာ အောက်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် နှစ်ယောက်ထိုင်ခုံ ၂လုံး စီ ဘယ်ညာ ၄ လုံးရှိတယ်။ အဲဒီ ခုံလေးလုံးကို ကုတင်အကြီး နှစ်လုံးအဖြစ် အသွင် ပြောင်းလို့ရတယ်။ တခါ ပေါ်မှာ နံရံကပ် တယောက်အိပ်ကုတင်နှစ်လုံးကလည်းပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ဒီတွဲတွေက မိသားစုတွေ အတွက်လုပ်ထားတာ။ ကျနော်က တခြားလက်မှတ်မရလို့ သူများမိသားစုနဲ့ ပေါင်းစီးရ တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျနော်ကနဲနဲစောရောက်သွားတော့ တခြားသူတွေ မရောက်သေးဘူး။ တွဲစောင့်က ထိုင်ခုံတွေကို ကုတင်အသွင်ပြောင်းနည်းကိုလာရှင်းပြပါတယ်။ ဒီအခန်းက လူ ၄ ယောက်စာ လက်မှတ်ရောင်း ထားတာပါ။ ရထားထွက်ကာနီးတဲ့အထိ တယောက်မှလဲရောက်မလာကြ သေးလို့ ကျနော်တယောက်တည်းများ တခန်းလုံးရတော့မှာလားလို့ တွေးပျော်နေတုံး ရထားဥသြဆွဲပါတော့ တယ်။ ထွက်ဘို့ ၅ မိနစ်ဘဲလိုတော့တယ် လေ။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ အန်တီကြီးတယောက်မောမောပန်းပန်းနဲ့ ကျနော့တွဲပေါ် ပြေးတက်လာပါတယ်။ သူလည်းတွဲပေါ်အရောက် ရထားလည်း စထွက်တော့တာပါဘဲ။ အန်တီကြီးဆိုပေမဲ့ အသက်က ၃၅ နဲ့ ၄၀ ကြား လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအန်တီမမက ကျနော့ကို တချက်ပြုံးပြပြီး အမေါဖြေနေတာနဲ့ ကျနော်လည်း ဘာမှမပြောတော့ဘဲ ပြန်ပြုံးပြရုံ ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ အမေါပြေလောက်တော့မှ သူက “အင်း…မောလိုက်တာ၊
မမီတော့ဘူးလားလို့၊ ထွက်ကာနီးမှ အရေးပေါ်လာလို့ အဖေါ်တွေလိုက်လာလို့မရ တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ သူစိမ်းတယောက်ပါတယ်ဆိုလို့ စိတ်နဲနဲပူနေတာ၊ တော်ပါသေးရဲ့၊ ” လို့ရဲရဲတင်းတင်းပြောလာပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူ့စကားအတိုင်း “ကျနော်ကလည်း လူတွေအများကြီးနဲ့ရှုတ်ရှက်နေမှာကိုပူနေတာ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ” ရထားထွက်လာလို့ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ သူက“အင်း၊ ပူလိုက်တာကွာ၊ တညလုံးရထားစီးရမှာဆိုတော့ အ၀တ်အစားလဲဦးမှပါဘဲ။”အဲလိုပြောပြီး သူ့လက်ဆွဲအိပ်ထဲက အ၀တ်အစားတချို့ကိုထုတ်ယူပါတယ်။ ပြီးတော့ နေရာက ထလိုက် ပါတယ်။ ကျနော့က သူ ရေချိုးခန်းထဲဝင်လဲမယ်ပဲ ထင်လိုက်တာပေါ့။ ဒီတွဲတွေမှာ ထိုင်ခုံတွေနဲ့ အိမ်သာ ရေချိုးခန်းကြားမှာ ကွက်လပ်တခုရှိပါတယ်။ ထိုင်ခုံနောက်မှီ ရဲ့နောက်မှာ လူတယောက်မတ်တတ် ရပ်လိုက်ရင် ခေါင်းနဲ့ ပုခုံးဘဲမြင်ရပါတယ်။ အန်တီမမက အဲဒီနေရာမှာဘဲ သူ့အ၀တ်အစားတွေကို ထိုင်ခုံနောက်မှီပေါ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က သူ့ဘက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတော့ သူ့ခေါင်းပိုင်းကိုမြငိနေရပါတယ်။ သူက ခပ်တည်တည်ဘဲ သူ့အ၀တ်အစားတွေကို တထည်ချင်းချွတ်ပါတော့ တယ်။ ချွတ်နေရင်းလဲ ကျနော့ကို ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ပြောနေတော့ ကျနော်လည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေနေရ တာပေါ့။ သူကထမဆုံး သူ့အင်းကျီနဲ့ ထမီကိုချွတ်လိုက်ပြီး သပ်သပ်ယပ်ယပ်လေးခေါက်လိုက်ပြီး ထိုင်ခုံ ကျောမှီ တန်းပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ထိုင်နေတဲ့နေရာက ဘာမှမမြင်ရပေမဲ့ အတွင်းခံတွေနဲ့ဘဲရှိနေမဲ့ သူ့ကို ကျနော့ရဲ့ စိတ်မျက်စေ့ နဲ့ တွေး ကြည့်လို့ရနေတော့ ကျနော့မှာ သွေးတွေဆူလာပါတယ်။ သူကတော့ခပ်တည်တည်ဘဲ လဲရမဲ့အ၀တ်တွေကို မ၀တ်သေးဘဲ သူ့ရဲ့ ဘရာစီယာကိုပါချွတ်လိုက်ပြီး တန်းပေါ် တင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တဆက်တည်း သူ့ရဲ့ပင်တီ ကိုလဲ ကုန်းချွတ်ပြီး တန်းပေါ်ထပ်တင်လိုက်ပြန်ပါ တယ်။ သူ့ပင်တီက ပန်းရောင် သေးသေးလေးပါ။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ။ အခန်းတခန်းထဲမှာ ယောက်ကျားနဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက်ထဲ၊ မိန်းမက ကိုယ်တုံးလုံးကြီး ချွတ်နေတယ်ဆိုတာကို သိနေရတဲ့ယောက်ကျားတယောက်ရဲ့ စိတ် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာကို၊ သူကတော့ ကိုယ်တုံးလုံးခနနေပြီးတော့မှ သူထုတ်ထားတဲ့ အင်းကျီကိုခေါင်းက စွပ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအင်းကျီက ခေါင်းစွပ်ဂါဝန်ပါ။ ဒူးလောက်ထိဘဲရှည်ပါတယ်။ အဲဒီတထည်ဘဲ နောက်ဘာမှ မ၀တ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျနော့အရှေ့ကခုံမှာလာထိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့“ဟူး၊ ခုမှဘဲ လွတ်လပ်သွားတော့တယ်။ မင်းလဲ အ၀တ်အစားပေါ့ပေါ့ပါးပါးလဲလိုက်ပါလား။ တညလုံးခရီးသွား ရမှာကွ။” လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျနော်ကလည်းချက်ဆိုနှာခေါင်းကမီးတောက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ “ဟုတ်ကဲ့” တခွန်းဘဲတိုတိုတုပ်တုပ်ပြောပြီး ကျနော့အိပ်ထဲက အိမ်နေရင်းဝတ်တဲ့ ကွာတာဘောင်းဘီ ပွပွကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူအ၀တ် လဲတဲ့နေရာကိုသွားပြီး သူ့လိုဘဲ တကိုယ်လုံးချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျနော့ကိုကျောပေးထားတဲ့ ခုံမှာ ထိုင်နေတာဆိုတော့ ကျနော့ကိုကြည့်မနေပါဘူး။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သူ့နောက်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနေနေရတာ ကလည်း ဖီလင်တမျိုးပါဘဲ။ ကျနော့ညီလေးကလည်း သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူ ဒေါသတွေ ကြီးနေပါတယ်။ ကျနော်လည်းဘောင်းဘီချက်ချင်းမ၀တ်သေးဘဲ ခနလောက်နေလိုက်ပြီးမှ ကျနော့ဘောင်းဘီကိုဝတ်လိုက်ပြီး စွပ်ကျယ်ဂျိုင်းပြတ်ကိုပြန်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ ခုနက တမင်ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ချင်လို့ မလိုဘဲတမင်ချွတ်လိုက် တာလေ။ ပြီးတော့မှ ကျနော့နေရာကို ကျနော်ပြန်လာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ “မင်းက မန္တလေးထိဘဲလား။”“ဟင့်အင်း၊ ကလေးမြို့ ထိသွားရမှာ”“သြော်၊ မမ ကတော့မန္တလေးထိဘဲ။”သူကသူ့ကိုသူ မမ လို့ပြောတော့လဲ မမ ပေါ့။ ရထားထွက်တာက ညနေ ၇ နာရီ၊ တနာရီလောက်ကြာတော့ ရထားကအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ခုတ်မောင်းနေပြီ။ တွဲက အဲယားကွန်းနဲ့ဆိုတော့ တွဲပြတင်းတွေကို ပိတ်ထားရတာပေါ့။တွဲပြတင်းက မှန်တထပ်၊ သံတထပ်။ ကျနော်တို့က မှန်ပြတင်းကိုဘဲချထားပါတယ်။ အပြင်ကိုလည်းကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့လေ။ အစမှာတော့ကျနော်က
ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ ဘာမှ သိပ်မပြော ဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ဂါဝန်အောက်ကပေါ်နေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းကိုဘဲ ခိုးခိုးကြည့်နေမိပါတယ်။ သူ့နို့က တော်တော်ထွား သလို နို့သီးခေါင်းကလဲ ချွန်ပြီးထွက်နေတော့ ကျနော့မှာ သက်ပြင်းကို ခိုးခိုးချနေရပါတယ်။ သူကတော့ ခပ်တည်တည်ဘဲဗျ။ ဂ နာရီလောက်ကျတော့ သူက ပါလာတဲ့ ၅ ဆင့်ဂျိုင့်ထမင်းဘူးကြီးဖွင့်ပြီး ကျနော့ကိုလဲစားဘို့ခေါ်ပါတယ်။ “မောင်လေးလာစားလေကွာ။”“ရပါတယ် မမ၊ စားပါ၊ ကျနော် ပဲခူးမှာ ရပ်ရင်ဝယ်စားမလို့ပါ။”“ဟာကွာ၊ မင်းကလည်း။ ဒီမှာကြည့် မမ မှာ ထမင်းတွေ အများကြီးထည့်လာတာ၊ မမ တယောက်ထဲကုန်မှာ မဟုတ်ဘူးကွ။ လာစားစမ်းပါ။ ”မမ က အတင်းကြွေးတော့လဲ ကျနော့မှာစားရတော့တာပေါ့။ ထမင်းစားပြီးတော့ မမက “တို့တွေ တဖက်ချမ်းကို ကုတင်လုပ်ပြီး တဖက်ကိုတော့ ဒီအတိုင်း ထိုင်ခုံလိုဘဲထားရင်ကောင်းမယ်နော်။ ဒါမှ အိပ်ချင်တဲ့အချိန် အိပ်ပြီး မအိပ်ချင်ရင် ထိုင်လို့ရတာပေါ့။ မောင်လေး ဘယ်လိုသဘောရလဲ။”“အင်း မမ ပြောသလို ကောင်းပါတယ်။၊ ဒါဆို ကျနော် ဟိုဖက်ချမ်းကို ကုတင်လုပ်လိုက်မယ်နော်။”ကျနော်လဲ
မမ ပြောသလို ထိုင်ခုံ တဖက်ချမ်းကို တွဲစောင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း ကုတင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ကုတင်လဲပြောင်းပြီးရော မမ က “မမခနကျောခင်းလိုက်ဦးမယ်။ ထမင်းစားပြီးတော့ ဗိုက်လေးပြီး လူက နဲနဲ ပြင်းကျောဆန့်ချင်တယ်ကွ။”“ဟုတ်ကဲ့ မမ၊ လှဲလေ။”မမ ကကုတင်ပေါ်မှာလှဲအိပ်လိုက်ပါတယ်။ သူက ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲအိပ်လိုက်တော့ သူ့ဂါဝန်ကလဲ တာဝန်ကျေ စွာ ဘဲ ပေါင်တ၀က်လောက်အထိ လန်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မမက ပြန်မဖုံးပါဘူး။ ဒီအတိုင်းဘဲ မျက်စိလေး မှိတ် ပြီး မှိန်းနေပါတယ်။ ၀တ်ထားတာက စပန့်ဂါဝန် အောက်ကဘာမှလဲမခံထားတော့ သူ့ကိုယ်လုံးကိုမြင်နေ ရတာ ရှိုက်ကြီးဖိုငယ် အသွယ်သွယ်ကို အတိုင်းသားမြင်နေရတာပါ။ ပက်လက်အိပ်နေတော့ သိတဲ့အတိုင်း စပန့်သားဆိုတာကလဲ အသားနဲ့ တွယ်ကပ်နေတတ်တော့ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကြားက စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ပေါ် စပန့် သားက ကပ်နေတော့ ဖေါင်းဖေါင်းကားကားကြီးကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီး မြင်နေရတော့တာ ပေါ့ဗျာ။ ဒီအန်တီ မမ ကြီးက ကျနော့ကို ကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်စက်နေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ ရထားက ပဲခူးဘူတါေ၇ာက်တော့ ခဏရပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း စားသောက်ပြီးပြီဆိုတော့ ဘာမှ မ၀ယ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ပဲခူးမှာ ခနဘဲရပ်ပြီး ရထားက ဆက်ထွက်လာပါတယ်။ ရထားဘူတာထဲဝင်တုံးက ခဏ ထထိုင်တဲ့ မမ က ရထားလဲထွက်လို့ အရှိန်လဲရရော ပြန်လှဲလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ လှဲလိုက်ပြီး သူပါလာတဲ့ မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်ကို ဖတ်နေပါတယ်။ သူ့ မျက်နှာက မဂ္ဂဇင်းနဲ့ကွယ်နေတော့ ကျနော်လည်း သူ့ကိုယ်လုံးကို ကောင်းကောင်း ပွဲတော်တည်ရတော့တာပေါ့ဗျာ။ ကျနော့စိတ်တွေကတော့ဗျောင်းဆန်နေပါပြီ။ အဲဒီအန်တီ မမ ကြီးကို တော်တော့်ကိုလိုးချင်နေတာပါ။ ဆော် ၄-၅ ပွေလိုးဘူးတော့ အရသာကိုလည်းသိနေပြီလေ။ သူလုပ်နေပုံက အထာပေးနေတာလား ပုံမှန်ဘဲလားဆိုတာ မခွဲတတ်တော့ ကျနော့မှာ လုံးဝမစရဲတာတော့ အမှန်ပါ။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ မမ က မောင်လေး မင်းလည်းညောင်းရောပေါ့၊ လာလှဲလေ လို့ခေါ်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ သူက ပြတင်းပေါက်ဘက်ကို ရွှေ့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကုတင်က လူနှစ်ယောက်ချောင်ချောင် အိပ်လို့ရတာတော့အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစိမ်းယောက်ကျားနဲ့မိန်းမ အရွယ်ဘယ်လောက်ကွာကွာ အတူတူ အိပ်ဘို့ ဆိုတာကတော့ ဟင်း…….ကြောချမ်းစရာပါ။ သူကခေါ်တော့လဲ ညင်းရင် ကျနော့လောက် စောက်သုံးမကျတဲ့ သူ ဒီဇဗြူမှာ ရှိတော့မယ်မထင်ဘူးလေ။ ကျနော်လည်း နှစ်ခါအခေါ်မစောင့်တော့ဘဲ ကုတင်ပေါ် တက်လှဲလိုက် ပါတယ်။ ကျနော်က ပက်လက်လေး ဘာမှမပြောဘဲလှဲနေတော့ ခနကြာတော့ မမက ဖတ်နေတဲ့မဂ္ဂဇင်းကို ချလိုက် ပြီး ကျနော့ဘက် စောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြိးတော့“မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်း”“၂၃ ပါ မမ။ ”“အင်း၊ မမက ၃၅ ရှိပြီ။ မင်းက ရန်ကုန်ကဘဲလား။ ”“ဟုတ်ကဲ့၊ မမ ကရော၊”“မမ က မန္တလေးကကွ။ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာ။ ခု အမေတို့ဆီ ခန ပြန်လာလယ်တာ။”မမနဲ့ ကျနော် အလာပ သလာပ တွေပြောရင်းကနေ မမက“မင်းမှာ ရီးစားရှိလား” လို့ ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့်ကြီးမေးချလိုက်ပါတယ်။“ရှိတော့ရှိဘူးတယ်။ ခုတော့မရှိတော့ဘူး။ ပြတ်သွားပြီ။”“အိုး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ။”“သူကယောက်ကျားယူသွားလို့ဗျ။ သူ့အိမ်ကပေးစားလိုက်တာလေ။ ကျနော်ကလဲ မိန်းမ မယူနိုင်သေးတော့ ဒီလိုဘဲ စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာပေါ့။ကြာခဲ့ပါပြီမမရာ၊ အဲဒီတုံးက ကျနော် ကျောင်း မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ သတ္တိလည်းမရှိဘူးလေ။”“ဒီအတိုင်းကြီးလွှတ်ပေးလိုက်ရတာလား။ ကိုယ်ရသင့်တာလေးကောယူမထားလိုက်ဘူးလား။”“အွန်၊ ဘာကိုလဲ၊ မမ။”
“မင်းကလည်း အ ချင်ယောင်မဆောင်စမ်းပါနဲ့၊မင်းတို့ရန်ကုန်သားတွေ ဒီလောက်မ အ ပါဘူး။”“မဟုတ်ဘူးလေ မမ ရဲ့ တော်ကြာ ကျနော်ထင်တာနဲ့ မမ ဆိုလိုတာနဲ့ လွဲနေရင် ပြသနာတက်မှာဆိုးလို့ မမ ရ။”“ဟင်းဟင်း၊ ဟုတ်ပြီ၊ ကဲ မင်းထင်တာကဘာလဲ ပြော။”“ဟို၊ မမ ဆိုလိုတာနဲ့လွဲနေရင် စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။”“အေးပါကွာ၊ ပြောကြည့်ပါဦး။ စိတ်မဆိုးပါဘူး။”“ဟို..Sex နဲ့ပါတ်သက်တာကိုပြောတာမို့လား။”“ဟင်းဟင်း၊ ဒါဘဲပေါ့၊ ကိုယ့်ရည်းစားဆီက တခြားယူစရာဘာရှိသေးလို့လဲ။”“အင်း…ပြောရရင်တော့ ကျနော် မယူလိုက်ဘူး မမ။”“အိုး၊ ဘာလို့လည်း၊ သူက မပေးတာလား။”“မဟုတ်ဘူး မမ ရ၊ အဲဒီတုံးက ကျနော် ကိုယ်တိုင်ကလည်းမတောင်းခဲ့ဘူး။”“ဟင်၊ အဲဒီတော့ မင်းတို့ချိန်းတွေ့ရင် ဘာလုပ်ကြလည်း။”“ကျနော်တို့ တွေ့ကြတာက လဘက်ရည်ဆိုင်တို့ ကင်တင်းတို့ ဘူးသီးကြော်ဆိုင်တို့ ဘဲလေ။ လက်လေးဘာလေးတော့ကိုင်ဖြစ်တာပေါ့။”“အင်၊ မင်းဟာက ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား။ ရန်ကုန်က စုံတွဲ လက်ကလေးကိုင်ယုံဆိုတာတော့ တော်တော်ယုံရခက်နေပြီ။”“ဒါပေမဲ့ အဲဒါတကယ် မမ ရဲ့။ အဲဒီတုံးက ကျနော်ကလည်း တော်တော်ကြောက်တတ်တာ။”“အင်းနေပါဦး၊ မင်း နမ်းကော နမ်းလိုက်ရရဲ့လား။ ”“ဟီးဟီး။ လူရှင်းတုံး အလစ်မှာ ၂ ခါနမ်းဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောခံရတာနဲ့ မကာမိဘူး။”“အင်း မင်းတို့ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါဆိုလည်း ရည်းစားဘာလို့ထားနေကြသေးလဲ။”“အဲဒီတော့ မင်းက တခါမှ မတခါရသေးဘူးလို့ ဆိုချင်တာလား”“အဲဒီတုံးကတော့ ဟုတ်တယ်။ ခုတော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဟီးဟီး။”“အေး၊ အဲ့လိုလုပ်ပါဟယ်။ ပြောစမ်းပါဦး၊ နောက်ရည်းစားတယောက်နဲ့လား။”“မဟုတ်ဘူး မမ၊ ကျနော်တို့ အိမ်နားက ဒေါ်လေး တယောက်နဲ့။”“ဝေ…. အင်း၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီ၊ ပြောပြစမ်းပါဦး။”“အာ၊ မမ ကလဲ၊ ရှက်စရာကြီး။”“အောင်မယ်တို့များရှက်ဖို့လဲ ထားပါဦး၊ ယောက်ကျားလေးကဘဲ ရှက်နေရသေးတယ်။ ကဲပါ၊ မရှက်ပါနဲ့၊ ပြောစမ်းပါ။ ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုစဖြစ်တာလည်း။”“အင်းပြောရရင်တော့ ဒီလိုပါ…………”ကျနော်တို့အိမ်မှာ က အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းသေးသေးလေးတခုလုပ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဇီးထုပ် ထုပ်တာပါ။ ဇီးသီးတွေကို ထညက်နဲ့ကြိုပြီး အအေးခံပြီးတော ပလပ်စတစ်အိပ်ထဲသွပ်ပြီးရောင်းရတာပါ။ ကျနော့ မိဘတွေနဲ့ ဦးမောင်လေးဆိုတဲ့ လူတယောက်နဲ့ ရှယ်ယာလုပ်ကြတာပါ။ လုပ်ငန်းက သိပ်မကြီးတော့ ကျနော်တို့ အိမ်သား တွေနဲ့ ဦးမောင်လေးတို့ အိမ်သားတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာများပါတယ်။ အပြင်လူဆိုလို့ ဇီးထုပ် ထုပ်တဲ့ ကောင်မ လေး ၃ ယောက်ဘဲရှိပါတယ်။ ဦးမောင်လေးရယ် သူ့မိန်းမ ဒေါ်လှမြင့်ရယ် (ကျနော်က ဒေါ်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်) ကျနော်တို့မိသားစုဘက်က အမေရယ် ကျနော်ရယ်၊ ကျနော့အကိုတယောက်ရယ်ဝိုင်းလုပ်ကြတာပါ။ဖြစ်ပုံက တခါက ဦးမောင်လေးတို့က ကျနော့ပုဆိုးဆွဲချွတ် စ ကြရင်းက ကျနော့ဟာပေါ်သွားပြီး ကျနော့ကို သူတို့က တုတ်ကြီး လို့နာမယ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ဦးမောင်လေးက ကျနော့ကို လူရှေ့မရှောင် သူရှေ့မရှောင် အမြဲတန်း “မင်းရထားစီးရင်ပုဆိုးမကျွတ်ကျစေနဲ့နော် တန်ဆာခဆောင်ရမယ်” လို့ နောက်တတ်ပါတယ်။ သူနောက်တာကကိစ္စမရှိဘူး။ သူ့မိန်းမက ကြားပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေတာက ခက်တာပါ။
ဒေါ်လေးဒေါ်လှမြင့်က ကျနော်သူ့ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါ လူလစ်ရင် နောက်သလိုလိုနဲ့ ကျနော့ ညီလေးကို လှမ်းလှမ်း ပုတ်တတ်ပါတယ်။ အစမှာတော့ ကျနော်လည်း အရမ်းရှက်တော့ အော်ပြေးတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ သူက လူလစ်တိုင်း အဲဒီလို လှမ်းလှမ်းကိုင်တတ်တော့ ကျနော်လည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ရိုးလာပြီး အရင်လို မပြေး တော့ဘဲ ခတ်တည်တည် အကိုင်ခံတတ်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂွင်းကလည်းကောင်းကောင်းထုတတ်နေပြီ ဆိုတော့ သူကိုင်တဲ့အခါ အရသာလဲ ခံတတ်နေပါပြီ။ သူကလဲ လူလစ်တဲ့အချိန်တို့ နှစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့အချိန်တို့ မှ ကိုင် တတ်တော့ ကျနော်လဲ ရဲလာတာပေါ့လေ။ အစပိုင်းမှာ သူက ရုတ်တယက်ပုတ်ရုံလောက်ဘဲလုပ်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်း မှာ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို ဆုပ်ကိုင်တဲ့အဆင့်အထြိဖစ်လာပါတယ်။ ကျနော့ညီလေးကလဲ သူကိုင်လိုက်ရင် ချက်ချင်းမာလာတတ်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးက အဲဒီလို ကိုင်ကိုင်ကြည့်ပြီး “နင့်ဦးလေး ပြောတာ မှန်သားဘဲ၊ နင့်ဟာက တန်ဆာဆောင်ရမဲ့ဟာဘဲ” လို့ဆိုတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်နဲ့ ဒေါ်လေးတို့နှစ်ယောက် အဆင်ပြေနေကြပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ ဦးမောင်လေးကလဲ ဇီးထုတ်တွေ ဈေးကိုသွားပို့နေ၊ အမေကလည်း အပြငိသွား အကိုကလဲကျူရှင်သွားနေတော့ ရုံထဲမှာ ကျနော်ရယ်ဒေါ်လေးရယ်နှစ်ယောက်ထဲဘဲရှိနေပါတယ်။ ဇီးထုတ်ထုတ်စရာကလည်းမရှိတော့ ကောင်မလေးတွေကလည်း အိမ်ပြန်ကုန်ပါပြီ။ အဲဒီမှာ ဒေါ်လေးက ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အပိုင်အသုံးချပါတော့တယ်။ သူက ခါတိုင်းလိုဘဲ ကျနော့လီးကို ပုဆိုးပေါ်ကနေကိုင်ပြီး နယ်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ည်း ကျနော့လီးက ဘယ်နေပါ့မလဲ၊ တောင်လာတော့တာပေါ့။ ဒေါ်လေးက “ဟဲ့ ငကျော်…နင့်ဟာကြီးကလည်း မနဲမနောကြီးပါလား လူနဲ့မလိုက်ဘူး၊ နင့်ဦးလေးဟာတောင် ဒီလောက်မကြီးဘူး” လို့ပြောပြီး ကျနော့ပုဆိုးကိုဆွဲလှန်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်းကောင်းနေတော့ ငြိမ်ငြိမ်လေးဘဲ သူလုပ်သမျှခံနေလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျနော့လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး အသက်ရှူပြင်းလာပါတယ်။ ပြီးတော့သူက ကျနော့ အရှေ့မှာထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျနော့လီးကြီးကို
ကိုင်ဆုပ်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ငင် ဂွင်းထုပေးပါတယ်။ ထုနေရင်းက ကျနော့လီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲ ငုံလိုက်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်ပါတော့တယ်။ လက်တဘက်က ဂွင်းထုပေးနေ တဘက်က ကျနော့ဘောအောက်ကနေပွတ်ပေးနေပြီး ပါးစပ်နဲ့ ကျနော့ထိပ်ကို စုပ်နေတော့ ဘယ်လောက်မှ မကြာလိုက်ပါဘူး ကျနော်အကြောအချင်တွေ တင်းလာပြီး လီးထိပ်က လရေတွေ ပန်းထွက်ချင်လာပါတယ်။ အဲတာနဲ့ “ဒေါ်လေး ကျနော်ထွက်တော့မယ်” လို့ ပြောပြီး ကျနော့လီးကို ဆွဲထုတ်မလို့လုပ်တော့ ဒေါ်လေးက အထုတ်မခံဘဲ သူ့ပါးစပ်ထဲမှာဘဲ အတင်းဆွဲကပ်ထားတော့ ကျနော်လည်း သူ့ပါးစပ်ထဲကိုဘဲပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဒေါ်လေးဒေါ်လှမြင့်က ကျနော့လရည်တွေကို မက်မက်မောမောဘဲ မြိုချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့လီးကို အရင်းကနေအဖျားထိ တဖြေးဖြေး ညှစ်ချပြီး စိမ့်ထွက်လာတဲ့လက်ကျံ လရည်တွေကိုပါ သူ့လျှာနဲ့ ယက်ယူပြီးမြိုချလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျနော့ကို ပြုံးကြည့်ပြီး “အင်း……….ကောင်းလိုက်တာ နင်ရောကောင်းလား”လို့ မေးပါတယ်။ ကျနောဘာမှ မပြောနိုင်ပါဘူး၊ ဂေါင်းကိုဘဲ ၄-၅ ကြီမ် ငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးဟာ အဲဒီနေ့ကစပြီး အခွင့်အရေးရတိုင်း ကျနော့ကို ခုလိုဘဲ ပုလွေကောင်းကောင်းပေးပြီး ကျနော့လရည်ကို မက်မက်မောမောကို သောက်ပါတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ လရည်ကိုတော်တော်ကြိုက်ပုံပါဘဲ။ ကြာလာတော့လည်း ကျနော်တို့ချင်းက ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အချေအနေပေးတာနဲ့လုပ်ငန်း စ တော့တာပါဘဲ။ ဒေါ်လေးကိုကျနော်က “ဒေါ်လေး ကျနော့လရည်သောက်ရတာကောင်းလို့လား” ဆိုတော့ သူက “ကောင်းလို့သောက်တာပေါ့၊ မယုံရင် နင်နဲနဲမြည်းကြည့်ပါလား” တဲ့။ ပြီးတော့ သူ့လက်မှာပေနေတဲ့ကျနော့လရည်တွေကို ကျနော့ပါးစပ်ထဲ ထဲ့ပေးတယ်။ မြည်းကြည့်ရတာတော့ ငံသလိုလို တမျိုးဘဲဗျ။ အရသာက ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး။ ဒေါ်လေးနဲ့ကျနော် ဒီလိုနဲ့ ၂ လလောက်ကြာသွားပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ ကျနော်က ဒေါ်လေးကို “ဒေါ်လေး ကျနော်လဲ ဒေါ်လေးဟာကိုကြည့်ချင်တယ်” လို့ပြောတော့ ဒေါ်လေးက “ကဲလာ” ဆိုပြီး သူက စားပွဲပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလှန်ပြပါတယ်။ ကျနော်က ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ရက်ကြည့်ရတာပေါ့။ ဒေါ်လေးက စားပွဲပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်တော့ သူ့ပေါင်ကြီးပြဲသွားတာပေါ့။ အဲဒီတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီးကိုပေါ်လာပါတော့တယ်။ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ အမွှေးလဲတပင်မှမရှိ၊ စောက်ဖုတ်ကြီးက ဖေါင်းဖေါင်းကားကားကြီး ပြောင်နေတာဘဲ။ ကျနော်လဲ ရင်တွေတအားခုံလာပါတော့တယ်။ ကျနော့တသက်မှာဒါပထမဆုံးအကြိမ် စောက်ဖုတ်ကြီးကို နီးနီးကပ်ကပ်မြင်ရတာလေ။ ကျနော့ကိုကြည့်ပြီး ဒေါ်လေးက ကိုင်ကြည့်လေလို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘယ်နေမလဲ။ ကိုင်ကြည့်တာပေါ့။ အစမှာတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြေးဖြေးလေးပွတ်ပွတ်ကြည့်ပါတယ်။ သူက “ဟဲ့ မထိတထိမလုပ်နဲ့၊ ယားတယ်ဟဲ့” တဲ့။အဲဒီတော့မှကျနော်လည်း ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ပွတ်လိုက်ဆွဲလိုက်၊ အမြှောင်းကြားထဲဖိဆွဲလိုက်လုပ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ဒေါ်လေးကတော့ တချိန်လုံးပြုံးကြည့်နေပါတယ်။ ကျနော်က “ဒေါ်လေးမှာ အမွှေးမပေါက်ဘူးလား” ဆိုတော့ သူက “ပေါက်တာပေါ့။ နှုတ်ထားတာ” တဲ့။ကျနော်လည်း ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဗျာ၊ အဲဒီစောက်ဖုတ်ကြီးကို အရမ်းချစ်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကုန်းပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကျနော့နှာခေါင်းမြှပ်ပြီး တရှိုက်မက်မက် ကိုနမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်က နံမနေဘဲ မွှေးတာလဲမဟုတ်တဲ့အနံ့ သင်းသင်းလေး တမျိုးရပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီအနံ့ကိုကြိုက်တယ်ဗျ။ ကျနော်က သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို တရှုတ်ရှုတ်နမ်းနေရာက လျှာနဲ့ပါ ယက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကပြောစရာကို မလိုဘဲည ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သူ့ဟာကြီးကို လိုလိုချင်ချင်ကို ယက်လိုက်နမ်းလိုက်လုပ်ပေးနေတာပါ။ ယက်ရင်းက ကျနော့လျှာကို သူ့စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်းကြားထဲသွင်းလိုက်တော့ အဲဒီထဲက ချွဲကျိကျိအရည်တွေကို ယက်မိပါတယ်။ အဲဒီအရည်တွေက ချိုတိုတိုလေးဗျ။ ကျနော်လည်းကောင်းကောင်းနဲ့ အသားကုန်ယက်လိုက် စုတ်လိုက်နဲ့ သူ့အရည်တွေ ထွက်သလောက်ကို စုပ်သောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ဒေါ်လေး အရည်က ချိုတယ်ဗျ” လို့ဆိုတော့ ဒေါ်လေးက “ဟုတ်လို့လား” တဲ့။ ကျနော်ကလည်း ဘာရမလည်း၊ သူလုပ်ခဲ့သလို သူ့စောက်ရည်နဲနဲကို လက်နဲ့ကလော်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့။ သူက “ဟုတ်သားဘဲနော်၊ ဒေါ်လေးလည်း ခုမှ သိတာ” တဲ့။
ကျနော်က ဒေါ်လေးကို သူ့စောက်ရည်ပြန်တိုက်ပြီးတော့ ကျနော့လက်စ အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးက ကျနော် သူ့စောက်ဖုတ်ကို ကောင်းကောင်းယက်နေတုံး ကျနော့ခေါင်းကို သူ့လက်တဘက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဆွဲကပ်လိုက် နဲနဲခွာလိုက်နဲ့ သူလိုသလို လန်းညွှန်နေပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ကျနော့ကို ပြီးအောင် လွေပေးထားတဲ့ဒေါ်လေးကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်နေတော့ ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ကို အသားကုန်ယက်ပါတော့တယ်။ စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးကိုယက်လိုက်၊ စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိုးထည့်လိုက်၊ စောက်စိကို စုပ်ပေးလိုက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်လေးဟာ စောက်စိကို စုပ်ပေးတဲ့အခါမှာ သူ့ဖင်ကြီးကော့ကော့တက်လာပြီး ရှီး…ရှီး.. နဲ့ သူ့ပါးစပ်က အသံတွေထွက်လာပါတယ်။ သူ ဒါကို ပိုအရသာတွေ့မှန်းသိလာတော့ ကျနော်လည်း သူ့စောက်စိကိုပိုပြီး အသားပေးပြီး စုပ်စုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်လေးကြာတော့ ဒေါ်လေးလဲ မနေနိုင်တော့ဘဲ သူ့ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ ကော့ကော့ ထိုးပြီး ကျနော့ မျက်နှာကို သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးနဲ့ အတင်းဆွဲကပ်ထားပြီး တချီပြီးသွားပါတော့တယ်။ ကျနော်လည်းဒေါ်လေးကို ကျေးဇူးဆပ်လိုက်ရလို့ စိတ်ထဲမှာပျော်လိုက်တာအရမ်းပါဘဲ။အဲဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ဟာ သူ့ ကိုယ် ပြုစု ကိုယ့် သူပြုစုနဲ့ အပေးအယူမျှနေကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က တယောက်နဲ့တယောက်တပြိုင်နက်တည်း အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ 69 နည်းနဲ့ လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက် နှစ်ယောက်ထဲတွေ့နိုင်တဲ့အချိန်တွေကလည်း မကြာမကြာရပါတယ်။ ဦးမောင်လေးကရော အမေတို့ကရော ကျနော့ကို ကလေးသာသာ ထင်ထားပြီး ဒေါ်လေး ဒေါ်လှမြင့်ကိုလည်း ဒီလို မထင်ထားကြတော့ ကျနော်တို့အတွက် အဆင်ပြေနေပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် စုပ်ရင်းယက်ရင်းနဲ့ ဘဲ ၃-၄ လ ကြာသွားပါတယ်။ အဲဒီကနေ တဆင့်တက်ပြီးကျနော် ဒေါ်လေးကိုလိုးချင်လာပါတယ်။ တခါမှလဲ မိန်းမ မလိုးဘူးသေးတော့ ပိုပြီးလိုးချင်လာပါတယ်။ ဒါကို ဒေါ်လေးကိုပြောပြတော့ ဒေါ်လေးက “ဟဲ့၊ ငါကဗိုက်ကြီးလာမှာကြောက်တယ်ဟဲ့။ နင့်ဦးလေးကလည်း ခု မလိုးတော့ တော့ ငါဗိုက်ကြီးလာရင်ပြသနာကတက်တော့မှာ။” “ဒေါ်လေးကလည်း ဗိုက်မကြီးတဲ့ဆေးစားပေါ့ဗျ။”“ဟဲ့၊ အဲဒါတွေငါမ၀ယ်ရဲဘူးဟဲ့။ ၀ယ်ရင်လူတွေသိကုန်မှာပေါ့။”“ အင်း၊ ကျနော်လည်းဒေါ်လေးကို အရမ်းလိုးချင်နေတာဗျ။”“အေးပါ၊ ငါလည်း အတူတူပါဘဲ၊ ငါလည်း ခံချင်နေတာပါ ။ နင်လည်းကြံဦးလေ။”ကျနော်လည်း ကျောင်းက အကိုကြီးတွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ အကူအညီတောင်းရတာပေါ့။ သူတို့ကတောင်မေးနေသေးတယ် ဘယ်ကောင်မလေးကိုတိုက်မလို့လဲလို့လေ။ ကျနော်ကလည်းခပ်ကြွားကြွားပေါ့၊ အရပ်ထဲက ကျနော့ဆော်လေးကို တိုက်မလို့ လို့ ရွှီးရတာပေါ့။ ကျောင်းက အကိုကြီးကနောက်တနေ့ ရောင်စုံဆေးကပ်လေးဝယ်လာပေးတယ်။ မျှားလေးတွေနဲ့လေ။ ကျနော်လည်းပျော်သွားပြီး နောက်တနေ့ဒေါ်လေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဆေးကပ်ကိုပေးလိုက်တာပေါ့။ ဒေါ်လေးက “နေဦး ချက်ချင်းကြီးလုပ်လို့မရသေးဘူးနော် တပါတ်လောက်နေမှလုပ်” ဆိုလို့ တော်တော်ကြီးအောင့်အီးပြီး သည်းခံနေရသေးတယ်။ ရတော့မယ်ဆိုကာမှ လူက မစောင့်နိုင်ဘူး ပိုပိုလိုချင်လာတယ်။ ဒေါ်လေးကတော့ တာဝန်ကျေစွာနဲ့ ပုလွေကိုတော့မှန်မှန်ပေးပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဂျာတာကိုတော့မလျှော့ပါဘူး။ တပါတ်တိတိကြာတဲ့နေ့မှာဘဲ ကျနော်က ဒေါ်လေးနော် ဒီနေ့တော့ လိုးကိုလိုးမှာလို့လူလစ်တာနဲ့ကပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးက အေးပါ၊အေးပါဆိုပြီးရီနေပါတယ်။ နေ့လည်ကျတော့ လူရှင်းသွားပြီးကျနော်တို့နှစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။ ကျနော်က ရုံတံခါးကို အတွင်းက ၈လန့်ပြေးထိုးပြီး ဒေါ်လေးဆီပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့လီးကလည်း မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဒင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ကိုတောင်မတ်နေပါပြီ။ ကျနော်လည်းဒေါ်လေးဆီကိုေေ၇ာက်ရော ဒေါ်လေးက စားပွဲနားမှာ အဆင်သင့်စောင့်နေပါတယ်။ “ဒေါ်လေး ဒီနေ့ မယက်တော့ဘူးနော် လိုးချင်နေတာ အရမ်းဖြစ်နေပြီဒေါ်လေးရ”“အေးပါဟယ်၊ ကဲ ကဲ လာ လာ၊ ဖြေးဖြေးလဲလုပ်ဦးနော် အတင်းစောင့်မထိုးတည့်လိုက်နဲ့ နာတတ်တယ်။”“ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်လေး”ဒေါ်လေးက ပြောပြောဆိုဆို သူ့ ထမီကိုရော အပေါ်အင်္ကျီကိုရော ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက အတွင်းခံတွေဝတ်မထားတော့ ဒေါ်လေးဟာ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ကျနော်လဲ ကျနော့ ပုဆိုးကို ကန်ချွတ်လိုက်ပြီးစွတ်ကျယ်အင်္ကျီကိုလည်း ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တိုနှစ်ယောက်စလုံးက မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း တွေဖြစ်သွားကြပါပြီ။ ဒေါ်လေးက စားပွဲပေါ်မှာ ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူပြီးထွက်လာတာပေါ့။ ကျနော်က သူ့ပေါင်ကြားဝင်ရပ်လိုက်ပြီး ကျနော့လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့လိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်တခါမှ မလိုးဘူးပေမဲ့ ကိုယ်ဒီလောက်ယက်ထား စုပ်ထားတဲ့စောက်ဖုတ်ကိုတော့ အပေါက်မလွဲတော့ပါဘူး။ ဒေါ်လေးပြောသလိုဘဲ ကျနော်က ကျနော့လီးကြီးကို ဒေါ်လေး စောက်ဖုတ်ထဲကို တဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ကလည်း ခံချင်လွန်းလို့စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲပြီးချွဲနေတော့ ချောချောချူချူဘဲ ၀င်သွားပါတယ်။ ကျနော့လီးတဆုံးရောက်ခါနီးမှ အထဲမှာတခုခုနဲ့ ထိပြီးရပ်သွားပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဒေါ်လေး စုပ်ပေးနေတုံးကနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ စောက်ဖုတ်ကြီးက ကျနော့လီးကို ငုံထားတဲ့အရသာဟာ တော်တော့ကိုကောင်းပါတယ်။ ကျနော်လည်း လီးတဆုံးဝင်သွားတော့ခနရပ်လိုက်ပြီးဒေါ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးက ပြုံးပြီး ခေါင်းတချက်ငြိမ့်ပြပါတယ်။ အိုကေ
ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်း ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ထဲကို ကျနော့လီးတ၀က်လောက် ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပြီးစလိုးပါတော့တယ်။ အစမှာတော့ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လိုးနေရာက နဲနဲကြာလာတော့ ကျနော့လိုးရှိန်လဲ မြန်လာပါတယ်။ အရှိန်မြန်လာသလိုဘဲ ဆောင့်အားကလည်း ပိုပြင်းလာပါတယ်။ ကျနော်ကဆောင့်ဆောင့်လိုးတိုင်း ဒေါ်လေးမှာ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ အံကိုကြိတ်ပြီးခံပါတယ်။ ပါးစပါကလည်း “အီး..အီး..” နဲ့ လည်ချောင်းထဲက အသံနက်ကြီးထွက်နေပါတယ်။ ဒေါ်လေးက “ငကျော်၊ ကြာကြာလိုးနော် ခနလေးနဲ့ မပြီးလိုက်နဲ”့လို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဒေါ်လေးနဲ့ ၃-၄ လလောက်ကျင့်ထားပြီးသားဆိုတော့ ခနလေးနဲ့မပြီးပါဘူး။ နောက်ပြီးဒေါ်လေးကကြာကြာခံချင်နေတော့ ကျနော့စိတ်ကလည်း ဒေါ်လေးကို အကြာကြီးလိုးပေးချင်စိတ်ရှိနေတော့ တော်တော်နဲ့မပြီးပါဘူး။
ကျနော်က လိုးနေရင်းနဲ့ ဒေါ်လေးမျက်နှာကိုဘဲကြည့်နေပြီး ဒေါ်လေး အရသာတွေ့နေတာကိုကြည့်ပြီး စိတ်ထဲမှာကျေနပ်နေမိပါတယ်။ ဒေါ်လေးကတော့ တခါတခါမှာ တအားကောင်းလာသလိုဖြစ်ပြီး ကျနော့ကို ကော့ကော့ထိုးလိုက် ခန ငြိမ်ခံလိုက် ပြန်ကော့ထိုးလိုက် ငြိမ်သွားလိုက်နဲ့တော်တော်ကို အရသာတွေ့နေပုံပါဘဲ။ တော်တော်လေးကြာတော့မှ ဒေါ်လေးက ကျနော့ကတကိုယ်လုံးချွေးတွေရွှဲနေတာကို သတိပြုမိသွားပြီး“သား ငကျော် တော်လိုက်တောလေ၊ ဒေါ်လေးဝပြီ” လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်း စိတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး ဒေါ်လေးကို အသားကုန်ကျုံးလိုးပြီး ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ထဲမှာ ကျနော့လရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပြီး တချီပြီးလိုက်ပါတယ်။ တချီပြီးသွားပြီး ကျနော့လီးကို ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ထဲက မထုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းဒေါ်လေးကို ကုန်းဖက်ပြီး ဒေါ်လေးပုခုံးပေါ်မှာ ကျနော့ခေါင်းတင်ပြီး နားနေလိုက်ပါတယ်။ ခနနားနေရင်းက ဒေါ်လေးမျက်နှာတခုလုံးကို လျှောက်နမ်းလိုက်
ဒေါ်လေးနှခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်လုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ နမ်းလို့ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။ အဲဒီလိုနမ်းနေရင်းနဲ့ ခုနက ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ထဲမှာယောင်ယောင်လေးပျော့သွားတဲ့ကျနော့လီးကြီးပြန်မာလာပါတယ်။
ကျနော့လီးကြီးသူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှာပြန်မာလာတာကို ခံစားမိတဲ့ဒေါ်လေးက ကျနော့မျက်နှာကို တအံ့တသြကြည့်ပြီးတော့ ပြုံးပြန်ပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဒေါ်လေးကိုယ်လုံးကိုခွာလိုက်ပြီူးနောက်တခေါက် ထပ်လိုးဘို့ ပြင်ပါတော့တယ်။ ဒီတခါမှာတော့ စကတည်းက ကျနော် အရှိန်မလျှော့ဘဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကို အသားကုန် ဆောင့်လိုးတာပါ။ ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း ကျနော့လရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေတော့ လိုးရတာပိုသွက်ပါတယ်။ အခုနက တချီ ပြီးထားတော့ ဒီတချီမှာ ပိုပြီးကြာပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာလိုးလိုက်တော့မှ ကျနော်လည်း နောက်တချီထပ်ပြီးသွားပါတယ်။ ဒီတခါတော့ဒေါ်လေးကို သိပ်ဂရုမစိုက်လိုက်တော့ ဒေါ်လေး ဘယ်နှစ်ချီလောက်ပြီးသွားလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ ကျနော်လည်းပြီးသွားရော ဒေါ်လေးက ကျနော့လီး သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကထွက်သွားအောင် ကျနော့ကို အသာတွန်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲထားရင် နောက်တခါထပ်တောင်လာပြီး ထပ်လိုးမှာကြောက်သလားမသိပါဘူး။ ကျနော့်ကို အသာတွန်းလိုက်ပြီး သူက စားပွဲပေါ်မှာ ကွေးကွေးလေး လှဲနေပြီး အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူနေပါတယ်။ ကျနော်လည်းအဲဒီတော့မှ ဘေးက ကုလားထိုင်ပေါ်ကို ထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ၅ မိနစ်လောက်ကြာတော့မှ ဒေါ်လေးဟာ စားပွဲပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး “ငကျော်ရေ နင်ကတော့ စံဘဲ နင့်ဦးလေး မလိုးခဲ့သမျှကို တခါတည်းနဲ့ အတိုးချပြီး လိုးပေးလိုက်တာဘဲ၊ ကောင်းလိုက်တာ”လို့ အသံပျော့ပျော့လေးနဲ့ပြောပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ဒေါ်လေး မပြုံးနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။
ထူးဆန်းတာကတော့ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဒေါ်လေးကိုကျနော်တော်တော်ချစ်သွားတာပါဘဲ။ အရင်
အဖုတ်စုပ် လီးစုပ်နေတုံးကတော့ဘာမှ သိပ်မဖြစ်ပေမဲ့ လိုးလဲလိုးပြီးသွားရော ဒေါ်လေးကို တော်တော်ချစ်သွားပါတယ်။ တွေ့လိုက်တာနဲ့ တအားကိုဖက်ဖက်နမ်းချင်နေပါတယ်။ နမ်းလို့လဲတော်တော်ကောင်းလာပါတယ်။ အခွင့်အရေး ရတိုင်း ဒေါ်လေးပါးကို အတင်းမွှေးမွှေးပေးဖြစ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းကိုလည်း
နမ်းဖြစ်တယ်။ လိုးခွင့်မရရင်တောင် နမ်းခွင့်ရနေယုံနဲ့ကို တော်တော်ကျေနပ်နေမိပါတယ်။ ဒေါ်လေးကလည်းအတူတူပါဘဲ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်မှာ သမီးရီးစားတွေလိုဖြစ်နေပါတယ်။ လူတွေလစ်တာနဲ့ အငန်းမရကို ဖက်နမ်းနေမိ ကြပါတယ်။ လူရှင်းရင်တော့ လိုးကြတော့တာပေါ့။ စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ ရီစရာပါ။ လန့်လဲလန့်စရာပါ။ ကျနော်က ၁၉ နှစ်တောင် မပြည့်သေး၊ ဒေါ်လေးက ၃၅..၃၆ အရွယ် အိမ်ထောင်ရှင် ကလေး ၃ ယောက်အမေ။ ကျနော့ မိဘတွေရော သူ့ယောက်ကျားရော သိသွားလို့ကတော့ မိုးမီးလောင်မှာပါ။ တောတ်တော်ကြာတဲ့အထိ ကျနော်နဲ့ ဒေါ်လေးတို့ ဒေါ်လေး စာရင်းတွက်တဲ့ စားပွဲပေါ်မှာဘဲ အမြဲ လိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒေါ်လေးကိုဖက်ပြီး တညလုံးအိပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အချေအနေက အဲဒီအထိတော့ခွင့်မပြုဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒေါ်လေးကလည်း ပုံစံတမျိုးတည်း အလိုးခံနေရတာကို ရိုးလာပုံရပါတယ်။ တနေ့တော့ ဒေါ်လေးက “ကျော်ကျော်.. ဒီတခါတမျိုးပြောင်းလုပ်ရအောင်နော်”“ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဒေါ်လေးပြောလေ”“ဒေါ်လေးကုန်း ပေးမယ် နောက်က လုပ် ”ဆိုပြီး စားပွဲပေါ် ကုန်းပေးပါတယ်။ ကျနော်လည်း နဲနဲကြောင်သွားပါတယ်။“ဒေါ်လေး၊ ဖင်ကိုလုပ်ရမှာလား။”“ဟယ်နင်ကလည်း ဖင်အောက်မှာစောက်ဖုတ်ကြီး မမြင်ဘူးလား။ တုံးပါ့ကွာ။”အဲဒီတော့မှ
ကျနော်လည်းသဘောပေါက်သွားပြီး သေသေချာချာကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ကြီး ပြူထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း တွေ့လိုက်တိုင်း စုတ်ချင်စရာကြီးဖြစ်နေ တော့ မလိုးခင် ကျနော် ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို နောက်က နေ ကုန်းယက် လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးကလဲ သူ့စောက်ဖုတ်ကိုယက်လို့ကတော့ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် မညင်းတတ်တော့ ငြိမ်ခံ နေပါတယ်။ ကျနော်ကလည်း မလိုးဘူးခင်ကတည်းက ယက်လာတဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို မယက်ရဘဲနဲ့ လိုးကို မလိုး ချင်ပါဘူး။ ကျနော် ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ယက်ပေးလိုက်တော့ ဒေါ်လေး စောက်ဖုတ်ကြီး တခုလုံး စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲလာပါတယ်။ သူ့စောက်ရည်တွေနဲ့ ကျနော့ မျက်နှာတခုလုံးလဲ စိုရွှဲနေပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲဝင်လာသမျကိုတော့ မြိုချပစ်လိုက်တာပါဘဲ။ ကြိုက်တာကိုး။ ဒေါ်လေးကလည်းကောင်းလွန်းတော့ သူ့ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့မျက်နှာကိုကော့ကော့ထိုးနေတော့တာပါဘဲ။ တော်တော်ကြာကြာ အဖုတ်ယက်ပြီးတော့မှ ကျနော်မတ်တတ် ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးက လိုးဘို့ စပြင်ကတည်းက ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီးသားဆိုတော့ အဆင်သင့်လိုး ယုံပါဘဲ။ ကျနော်လည်း မတ်တတ်ရပ်ပြီး ကျနော့လီးကို ဒေါ်လေး စောက်ဖုတ်ဝကို တေ့လိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက နောက်ကိုပြူထွက်နေတော့ ကျနော့ လီးနဲ့ သူ့ စောက်ဖုတ် အ၀နဲ့က တန်းနေတာပါဘဲ။ ကျနော်လည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲ ကျနော့လီးကို ဒေါ်လေး စောက်ခေါင်းထဲ တခါထဲ တဆုံး သွင်းထဲ့လိုက် ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ စောက်ရေတွေနဲ့ ရွဲနေတော့ ချောချောချူချူဘဲ တဆုံးဝင်သွားပြီး တခုခုနဲ့ ခံနေသလိုဖြစ်ပြီး ဒုတ်ကနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒေါ်လေးလဲ အင့်ကနဲ တချက်ဖြစ်သွားပြီး “ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ငကျော်ရယ် ငါ့ မှာအောင့်သွားတာဘဲ။ ”“စောရီး၊ ဒေါ်လေး ကျနော်က ခါတိုင်းလိုဘဲမှတ်လို့။”“ဟဲ့၊ ဒီပုံစံက ပိုထိတယ်ဟဲ့၊ သိပ်ကြမ်းကြမ်း မလုပ်နဲ့”“ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး။”ကျနော်လည်း ဒေါ်လေးပြောသလို ကြမ်းကြမ်း မဆောင့်တော့ဘဲ မှန်မှန်လေးဘဲ လိုးပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ခနဘဲကြာပါတယ်၊ ဒေါ်လေးက “ငကျော်၊ နဲနဲ တိုးဆောင့်စမ်း” လို့ဆိုလာပါတယ်။ ခုနက
တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ထိနေတာလည်း ခုတော့ မထိတော့သလိုဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်လည်း အရှိန် မြှင့်ပြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးပါတော့တယ်။ ဒီတခါတော့ ဒေါ်လေးက ခုနကလို မတားတော့ဘဲ တအီးအီးနဲ့ ရင်ခေါင်းထဲက အသံညှစ်ထုတ်ပြီး ခံနေပါတယ်။ နောက်ကလိုးရတော့ သူ့ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့ ပေါင်နဲ့ရော ဆီးခုံနဲ့ ရော ရိုက်သံက တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ ပက်လက်လိုးတုံးကနဲ့ မတူတဲ့ အသံတမျိုးထွက်နေပါတယ်။ ကျနော့မှာလဲ သူ့ဖင် ကြီးကိုကြည့်ပြီး လိုးရတော့ ဖီလင်က တမျိုးပါဘဲ။ ပို လိုးလို့ကောင်းသလိုပါဘဲ။ ကျနော်က သူ့ ခါးကို ဆွဲဆွဲပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးရတာ တော်တော်လဲ အားရပါတယ်။ ဆောင့်ရင်းဆောင့်ရင်းနဲ့ ကျနော်လည်း ပို ပို အားပါလာ ပြီး အသားကုန်ဆောင့်ပါတော့တယ်။ ဒေါ်လေးကလည်း ပိုခံလို့ကောင်းလာပုံပါဘဲ။ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေး နေပါတယ်။ တအားအား တအီးအီး နဲ့ ပါးစပ်ကလည်း အသံမျိုးစုံထွက်နေပါတယ်။ တော်တော်လေးကြာလာတော့ ကျနော်လည်း ပြီးချင်လာပါတယ်။
ပူကလည်း ပူတော့ ချွေးတွေကလည်း နှစ်ယောက်စလုံးရွှဲနစ်နေပါပြီ။ ကျနော်လည်း ဆက်မထိမ်းတော့ဘဲ အသားကုန် ဆောင့်လိုးရင်း ကျနော့လရည် တွေကို ဒေါ်လေး စောက်ဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်ရင်းပြီးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မောမောနဲ့ လီးကိုတောင်ဆွဲမထုတ် နိုင်တော့ဘဲ ဒေါ်လေးကျောပေါ်မှာဘဲ မှောက်ယက်လေး ခဏ အနားယူလိုက်ရပါတော့တယ်။ ကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်ကိုကောင်းတာပါ။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က အလုပ်ရုံထဲမှာ အခွင့်အရေးကလည်း မကြာမကြာရတော့ ခုဆို ကျနော်တို့မှာ လင်မယား လုံးလုံး ဖြစ်နေပါပြီ။ လူရှင်းတာနဲ့ လှန်လိုး ချွတ်လိုး ကြုံသလို လိုးကြတော့တာပါဘဲ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျနော့မှာ ဒေါ်လေးနဲ့
တညလုံးဖက်ပြီး အိပ်ချင်စိတ် တအားပေါက်လာပါတယ်။ ကျနော်တို့က လိုးသာ လိုးနေကြတာ တခါမှ အတူတူ အကြာကြီး မအိပ်ဖူးဘူး။ ကျနော်က ကျနော့ဆန္ဒကို ဒေါ်လေးကို ပြောတော့“နေဦး ဒေါ်လေး အချေအနေကြည့်လိုက်ဦးမယ်” လို့ပြောပါတယ်။
တပါတ်လောက်ကြာတော့ ဦးလေး ဦးမောင်လေး က ဇီးသီးကုန်ကြမ်းနောက်လိုက်ဖို့ နယ်ကို သွားရပါတော့တယ်။ ဒေါ်လေးက အမေ့ကိုပြောပြီး ဦးလေးမရှိတုံး ကျနော့ကို သူတို့အိမ်မှာ စောင့်အိပ်ဖို့ အကူအညီတောင်းပါတယ်။ အမေကတော့ ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျနော်ကသာ သွားမအိပ်ချင်သလို ဟန်ဆောင် လိုက်လို့ အမေ့မှာ ကျနော့ကို မနဲချော့လွှတ်ရပါတယ်။ ဒီလိုဘဲလူလည်ကျရတယ်လေ။ သံသယ ကင်းအောင် ပေါ့။ သိပ်သွားချင်ပုံပြလိုက်ရင် တမျိုးထင်နေဦးမယ်။ ခုတော့ အိုကေမှာ စိုပြေပြီပေါ့။ ခက်တာက ဒေါ်လေးတို့ အိမ်မှာ ကလေးအကြီးနှစ်ယောက်က သပ်သပ်တခန်း
အိပ်ပေမဲ့ အငယ်လေးက ဒေါ်လေးနဲ့ တူတူအိပ်တာလေ။ အကြီးနှစ်ယောက်က ၇ နှစ် နဲ့ ၅ နှစ်၊ အငယ်လေးက ၃ နှစ်သားလေး။ ညသူတို့ အိပ်ပြီဆိုရင် အသာလေး အကြီးနှစ်ယောက်အခန်းကို အပြင်က ဂျက်ထိုး၊ အငယ်လေးကိုတော့ ဒေါ်လေးတို့အိပ်ယာပေါ်မှာ သိပ်ထား၊ နိုးရင် အသံကြားရအောင် တံခါးကိုဖွင့်ထားပြီး ဒေါ်လေးက ကျနော်အိပ်တဲ့ အိမ်ရှေ့ခန်း အိပ်ယာထဲကိုလာ ပါတယ်။ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ် အဆင်ကတော့ ချောနေတာပါဘဲ။ ဒေါ်လေးကိုဖက်ပြီး တညလုံးအိပ်ရ တာ လည်း တော်တော် အရသာရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ဖက်အိပ်တာလေ။ ဒေါ်လေးက ဘေးမှာ ဂါဝန်အရှည်ကြီး တထည် အဆင်သင့် ထားပြီးအိပ်ပါတယ်။ ဒါမှ မတော်လို့ ကလေး တယောက် ယောက် နိုးရင် ချက်ချင်း ထသွားနိုင်အောင်လို့လေ။ ကလေးတွေကလည်း ငယ်သေးတော့ အိပ်ပြီဆို မနက်
မိုးလင်းမှ နှိုးယူရတာပါ။ တခါဘဲ အငယ်လေး လန့်နိုးလို့ ထသွားရဘူးပါတယ်။ ကြမ်းပေါ်မှာ မွှေ့ယာပါး လေးခင်းပြီးအိပ်ရတော့ အရင် အလုပ်ရုံထဲမှာလို မတ်တတ်တော့ မလိုးဖြစ်တော့ဘူး ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်လေးကို ဖက်ပြီး လှေကြီးထိုး ရိုးရိုး လိုးရတာလဲ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်က ဖက် နေရ တာကို ကြိုက်နေတော့ ဖက်လိုးလေးလိုးရတာ ကျနော့အတွက်တော့ ရှယ်ပါဘဲ။ တခါတခါမှာ ဒေါ်လေးက အားမရလို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အလိုးခံချင်ရင်တော့ ထပြီး ဖါးထိုင်ထိုင်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်ပေးရ ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲလိုးရလိုးရ ဒေါ်လေးကတော့ လိုးလို့ကိုကောင်းတာပါ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ညဆို ဖက်ပြီးလိုး နေ့ခင်းဆိုလည်း ရုံထဲမှာ မတ်တတ်ဆောင့်နဲ့ လောကကြီးက တော်တော်ကိုနေလို့ကောင်းပါတယ်။ တပါတ်လောက်ကြာတော့ ဦးမောင်လေးပြန်လာလို့ ဒေါ်လေးကို ညဘက် ဖက်ဖက်ပြီး လိုးခွင့်လေး ရပ်သွား ပါတော့တယ်။ X X X X Xကျနော်ပြောသမျကိုငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ အန်တီမမ က “မင်းက မရတော့လည်းမရလို့ ရတော့လည်း ရှယ်ဘဲနော်။ ခုထိမင်းတို့ အဆင်ပြေနေတုံးဘဲလား” “မဟုတ်ဘူး
မမ ရဲ့၊ ကျနော်တို့ တနှစ်လောက်ကြာတော့ ဇီးထုပ်လုပ်ငန်းက မကိုက်တော့လို့ ရပ်လိုက်တယ် လေ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ မှာ တခါလောက်အလုပ်ဖြစ်ဘို့အရေး တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ဖန်တီး ရတယ်။ ဒါလည်းခဏပါဘဲ။ ဦးလေး ဦးမောင်လေးက ရန်ကုန်မှာ စီးပွားရေး အစဉ်မပြေတော့လို့ သံတွဲဘက်ကိုပြောင်း သွားကြတော့ ကျနော်တို့လည်း ဝေးရတော့တာပေါ့။ ပထမ ရီးစားနဲ့ကွဲတုံးက ဘာမှ သိပ်မခံစားလိုက်ရဘူး၊ ဒေါ်လေးဒေါ်လှမြင့်နဲ့ ခွဲရတော့ ကျနော့မှာ လိမ့်နေအောင်
ခံစားရတယ်။”“မင်းဒေါ်လေးနဲ့ရော နောက်တွေ့ကြသေးလား။”“ရန်ကုန် တခါတလေ
လာတဲ့အခါ ကျနော်တို့ အိမ်မှာတည်းတော့ တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခွင့်အရေးကလုံးဝ မရဘူး။ တခါဘဲ လစ်လို့ ဖက်နမ်းလိုက်ရတယ်။ တခါကဆို လစ်ပြီဆိုပြီး ဒေါ်လေးက ကုန်းပြီး ထမီလှန်ပြီး ကျနော် က နောက်ကနေ ထည့်ပြီး ၁၀ ချက်လောက်ဘဲ ဆောင့်ရသေးတယ် လူယောက်လာလို့ ဆွဲချွတ်လိုက် ရတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ လုံးဝမတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူး။”“မင်းဒေါ်လေး နဲ့ ဖြစ်ပြီး နောက်ကော တခြားဘယ်သူနဲ့မှ မဖြစ်တော့ဘူးလား”“ဟင့်အင်း မမ၊ ဒေါ်လေးနဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ တာတောင် ၆ လ ကျော်သွားပြီ”“အင်းငါ့မောင်လည်း သနားပါတယ်။”အန်တီ
မမ က ကျနော်ပြောတာတွေနားထောင်ပြီး၊ ကျနော့ကို ကျောခိုင်းပြီး ကွေးကွေးလေး အိပ်နေပါတယ်။ ကျနော့မှာသာ ကျနော့ အတွင်းရေးတွေ သူ့ကိုပြောလိုက်ရတော့ သူ့ကျောကုန်းကိုကြည့်ပြီး သူ့ကို လိုးချင် စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်နေပါတော့တယ်။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ကျောကုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း လီးတောင် တာဘဲနော်။ အချိန်ကလည်း ညတော်တော်နက်နေပြီဆိုတော့ အန်တီ မမ က “ကဲ အိပ်ကြ၇အောင်၊ မီးပိတ်လိုက်တော့” လို့ပြောလာပါတယ်။
မီးပိတ်လိုက်ပေမဲ့ အပြင်က လရောင်ကြောင့် သူ့ကိုယ်လုံးကို မြင်နေရပါတယ်။ သူက ကျနော့ကိုကျောပေးပြီးဘေးစောင်း ကွေးကွေးလေး အိပ်နေသလို ကျနော်ကလည်း သူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီး ဘေးစောင်းလေးဘဲ ကွေးအိပ်ရင်း ကျနော့လီးကို ကျနော်ဆုပ်ကိုင်နေရပါတယ်။ တအားလိုးချင်နေတဲ့အချိန်မှာ မလိုးရတဲ့ဒုက္ခ္ခ ကလည်းတော်တော်ကြီးပါတယ်။ လီးက ဒုတ်တချောင်းလို မါတောင့်နေပြီး အောင့် တောင်
အောင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ နာရီဝက်လောက်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်၊ အန်တီမမ က နဲနဲလှုပ်လာပါတယ်။ ကျနော်က ကိုယ့် ဒုက္ခ နဲ့ကိုယ် အိပ်မပျော်တဲ့သူဆိုတော့ မြင်နေပါတယ်။ အန်တီမမ ကိုယ်လုံးက နဲနဲပိုကွေး လာပြီး ကျနော့ဖက်နဲနဲ ပိုရောက်လာပါတယ်။ ကျနော့ဘက်မှာနောက်ထပ်ဆုတ် စရာနေရာကလည်းမရှိ တော့ ကျနော်က ဒီအတိုင်းဘဲငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ ငြိမ်နေယုံ မကဘဲ နောက်တခါ နဲနဲလောက်များ တိုးလာရင် ကျနော်နဲ့ထိအောင် ကျနော်က နဲနဲလေး ရှေ့တိုးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်က ထိလုထိခင်ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျနော်မျှော်လင့်နေသလိုဘဲ အန်တိမမ က ထပ်ပြီးတိုးလာပါတယ်။ ဒီတခါတော့ သူ့ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့လီးနဲ့ လာထိနေပါတော့တယ်။ ကျနော်ကလည်း တမင်ထိအောင်ကို လီးကို ပေါင်ကြားညှပ်မထားဘဲ ပေါင်ကို နဲနဲကားပေးထားတော့ ကျနော့ လီးက အန်တီမမ ရဲ့ ဖင် အကွဲကြောင်းကြားထဲ
အပ်ကျ မတ်ကျကိုဝင်နေပါတော့တယ်။ အန်တီမမ က အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကို အရှေ့ပြန်မတိုးဘဲ သူ့ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့လီးကို ပိုပြီး တိုးကပ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရပါပြီ။ အလုပ်ဖြစ်ပီဆိုတာကို ကျနော်လည်း သဘောပေါက်နေပါပြီ။ ကျနော်က ကျနော့ခါးကို နဲနဲ ကော့ကော့ထိုးပေးလိုက်တော့ ကျနော့ လီးကြီးက သူ့ဖင်အကွဲကြောင်းကြားထဲမှာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဖြစ်နေ ပါတော့တယ်။ ကျနော်ကလှုပ်နေတုံး သူကလည်း သူ့ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ထိုးပေးနေပါတယ်။ သူ့အသက်ရှူသံကလည်း ပြင်းလာပြီး တရှူးရှူးနဲ့ နှာမှုတ်သံလိုမျိုးကြားလာရပါတယ်။ သူ့ဖင်နဲ့ ကျနော့လီးတို့ရဲ့ ပွတ်သပ် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် သူ့ ဂါဝန်က တဖြေးဖြေးနဲ့ အပေါ်ကို တက်လာပါတယ်။ ခနလောက်ကြာတော့ သူ့ ဂါဝန်က ခါးကိုရောက်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း အချိန် သိပ်မဆွဲတော့ဘဲ ကျနော့ ဘောင်းဘီကို အသာလေး ဆွဲချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော့ လီးမာမာကြီးက သူ့ဖင်ကြားမှာနေရာရသွားပါတော့တယ်။ အန်တီမမ က သူ့ကိုယ်ကို ပိုပြီးကုန်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် သူ့ အဖုတ်က နောက်ကိုပြူထွက်လာပြီး ကျနော့လီးနဲ့ တေ့ထားသလိုဖြစ်လာပြီး ကျနော့လီးက သူ့စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကြားထဲကို အံကျဂွင်ကျ ရောက်သွားပါတော့တယ်. သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း စောက်ရည်တွေနဲ့ စိုနေပါပြီ။ ကျနော်က ကျနော့လီးကို လက်နဲ့ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း ခံချင်နေလို့စောက်ရည်တွေ ရွဲနေ တော့ ကျနော့်လီးက ချောချောချူချူဘဲ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ၀င်သွားပါတယ်။ ဘေးတိုက်ကြီးထည့်ရတာက တကြောင်း သူ့တင်ပါးက
ကားပြီး ကျနော့ တင်ပါးက သေးတော့ တည့်တည့် မကျဘဲစောင်းနေတော့ အဆုံး ထိတော့မ၀င်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဘေးတိုက် လေးဘဲ သူ့ကို ၀င်သလောက် တစောင်းလိုးနေလိုက်ပါတယ်။ လီးကတအားမာနေတော့ သူ့မှာ တော်တော်အရသာတွေ့နေပုံ ရပါတယ်။ အင်း…အင်း…အင်း… နဲ့ ညည်းသံထွက်နေပါတယ်။ကျနော် ကော့ထိုးနေတုံး သူကလည်း အငြိမ် မနေဘဲ သူ့ဖင်ကြီးကို ကျနော့ဘက် အတင်း တွန်းတွန်း ပို့ပြီး အရသာခံနေပါတယ်။ ဘေးတိုက်လိုးရတာ စိတ်ကြိုက်ဆောင့်လို့မရတော့ ကြာလာ တော့ ကျနော် သိပ် အားမရတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ လီးကို ခနဆွဲချွတ်လိုက် ပြီး ထထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပေါင်တချောင်းကို ဆွဲဆန့် နောက်တချောင်းကို အပေါ်ကို ကွေးတင်လိုက် ပါတယ်။ သူ့ပုံစံက ဘေးတစောင်း မှောက်ရက်လေး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနောက သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျနော့လီးကို ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ထိုင်ရက် လိုးပါ တော့တယ်။ ဒီပုံစံနဲ့ကျတော့ ခုနက လို မဟုတ်တော့ဘဲ အဆုံး ထိဝင်ပြီး စိတ်ကြိုက် အားရ ပါးရ ဆောင့်လိုးလို့ ရပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျနော့ စွပ်ကျယ်က လီးနဲ့ စောက်ဖုတ်ကြား ၀င်ဝင်လာလို့ ခေါင်းပေါ် ကျော်ချွတ်လိုက်ပြီး တဘက်ခုံပေါ်ကိုလှမ်းပစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော် လည်း အားရှိသလောက် ဆောင့်ဆောင့်ပြီး တော့ကို လိုးပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ညည်းရုံတင်မဟုတ်တော့ဘဲ အ.. အ…အ..နဲ့ အော်သံ နဲနဲထွက်လာပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာ လိုးပြီး တော့ကျနော် ပုံစံတမျိုးထပ်ပြောင်း လိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ သူ့ကို ပက်လက်ဆွဲလှန် လိုက်ပြီး သူ့ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို ဆွဲမလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ဆွဲမလိုက်တာနဲ့ သူက သူ့လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ခြေထောက် တချောင်းစီကို ချေကျင်းဝတ်ကနေဆွဲထား လိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကလဲ အဲဒီတော့မှ အစည်းအတားမရှိ ဖေါင်းဖေါင်း ကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနော်က အစက တဆက်ထဲ လိုးတော့မလို့ လုပ်နေပြီးမှ လရောင်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို မြင်လိုက်ရတော့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ ကုန်း ယက်လိုက်ပါ တော့တယ်။ ကျနော့ဘ၀မှာ စောက်ဖုတ် ယက်တာနဲ့ စခဲ့တော့ စောက်ဖုတ်ကို
တအားယက်ချင်ပါတယ်။ အန်တီမမ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကလည်း ကျနော့ အကြိုက် အမွှေးကင်းစင်ပြီးပြောင်ချောနေတော့ ကျနော် အပီကို ယက်ပါတော့ တယ်။ စောက်ဖုတ်နှုပ်ခမ်း နှစ်ခုကြားမှာ ပြူထွက်နေတဲ့ စောက်စိကြီးကလည်း တော်တော်ကြီး ပါတယ်။ တအားထန်နေတော့ စောက်စိ ကြီးကလည်း မာပြီးတင်းနေပါတယ်။ စောက်စိကြီးကို နှုပ်ခမ်း နှစ်ခု ကြားထဲ ဖိညှပ်ထားပြီး စောက်စိထိပ်ကို လျှာနဲ့ ကလိပေးလိုက်တော့ သူ့မှာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားပါတယ်။ ပါးစပ်က ရှီး….ရှီး….ရှီး….အာ…ရှီး…အင်း…ဟင်း… နဲ့ အသံစုံထွက်လာပါတော့တယ်။ ခုနက
တော်တော် ကြာကြာ လိုးထားတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက သူ့စောက်ရည်တွေရော ကျနော့လရည်တွေ ရော နဲ့ ရွှဲရွှဲစို နေပါ တယ်။ ကျနော်လည်း ယက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ယက်လိုက် စောက်စိကို စုပ်လိုက်နဲ့ မနားတမ်း လုပ် နေတော့ အန်တီမမ မှာ တအား ကောင်းလာပြီး သူ့ဖင်ကြီးကို အပေါ်ကော့ကော့ထိုး နေပါတော့တယ်။ ဒီလို တော်တော် ကြာကြာ ယက်ပေးပြီး တော့မှ ကျနော် ယက်တဲ့လုပ်ငန်းကို ခန နားလိုက်ပြီး ကျနော့
လီးကို သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ ပြန် ထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ဖြေးဖြေး မလုပ်တော့ဘဲ တခါတည်း တဆုံး ဆောင့်လိုး ပြစ်လိုက်တာ ပါ။ အင့်ကနဲတချက်ဖြစ်သွားပေမဲ့ အန်တီမမက သိပ်ဖြုံပုံမရပါဘူး။ အဲဒီတော့လည်း ကျနော်သူ့ကို မညှာမတာ ကို အသားကုန်ဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်။ သူကအောက်ကပက်လက်ကြီးပေါင်ဖြဲထားပေးတော့ ကျနော် လိုးနေရင်းနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်နေရ ပါတယ်။ ကြည့်နေရင်း လိုးနေရင်းနဲ့ကို အရမ်းယက်ချင်လာလို့ လီးချွတ်ပြီးခန ကုန်းယက်လိုက်ပါသေးတယ်။ ပြီးမှ တဖုံးဖုံးနဲ့ မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆောင့်ပါတော့တယ်။ အန်တိမမမှာတော့ အိ…အား....အင့်…… အိ…… အိ….. အ…..အ…..အ....အင့်….. နဲ့ တချက်ဆောင့်လိုက် တိုင်း အသံတမျိုး ထွက်နေ ပါတော့တယ်။ တော်တော်လေးကြာအောင်ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီးတော့ ကျနော်လဲ ဆက် မထိမ်းနိုင်တော့ဘဲ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှာ ကျနော့ လရည်တွေကို ပန်းထည့်ရင်းတချီပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျနော် ပြီးသွားတာနဲ့ သူက အသာလေးဘေးစောင်းလှည့် လိုက်တော့ ကျနော့လီးလဲကျွတ်သွားပါ တော့တယ်။ တချီသာပြီးတယ် ကျနော့ လီးကတော့ လုံးလုံးလျားလျားကြီးတော့ ပျော့မသွားသေးပါဘူး။ ခနနားပြီးမှ နောက် တချီထပ်လိုးဘို့ အားခဲထားလိုက်ပါတယ်။ အန်တီမမ ကတော့ တခါထဲ တရှူးရှူးနဲ့ မှောက်ရက်ကလေး အိပ် ပျော်သွားပါတော့တယ်။ အင်္ကျီက ခါးမှာ၊ ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာပါ။ ခုမှသတိထားမိတယ် ကျနော် သူ့စောက်ဖုတ်ကိုဘဲ မဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာ သူ့နို့ကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိ မိပါဘူး။ သူအိပ်ပျော်နေတုံး ကျနော် သူ့ ဂါဝန်ကို အပေါ်ဆွဲမပြီး ချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ခုမှဘဲ တကိုယ်လုံးကို လ ရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ကောင်း ကောင်းကြည့်ရပါတော့တယ်။ သူက ဒေါ်လေးဒေါ်လှမြင့် ထက်စာရင် အလုံးအထည် ပိုကြီးပါတယ်။ လိုးလို့ကတော့ကောင်းပေမဲ့ ဒေါ်လေးကို လိုးရတာ ပိုကောင်းသလိုပါဘဲ။ ဒေါ်လေးစောက်ဖုတ်က သူ့ထက် ပို စီးပြီး သူကနဲနဲချောင်သလိုပါဘဲ. ကြည့်ရတာ သူ့ယောကျားလီးက တော်တော်ကြီးပုံရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူ့ယောကျားလီးထက်ကြီးတဲ့ ဘာတွေ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲထည့်ထားလည်းမှမသိတာ။ ကျနော်လည်း သူ့ကို ကြည့်နေရင်း လီးက ပြန် စံချိန်မီလာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီတော့လဲ နောက်တချီထပ်ဆွဲဖို့ ပထမ တချီတုံးက လိုဘဲ နောက်ကထည့် ဘို့ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို နဲနဲလေးဖြဲလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပေါင်ပေါ် ခွလိုက်ပြီး နောက်ကနေဘဲ သူ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ကျနော့လီးကို ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ အိပ်ပျော် နေတုံး ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့
သူ့စောက် ဖုတ် က ကျနော့လရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေတော့ ကျနော့်မှာ ချောချောချူချူဘဲ လိုးလို့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ ကျနော်လိုးလို့ကောင်းနေတုံးရှိသေးတယ်၊ ရထားက အရှိန်လျှော့ပြီး ဘူတာတခုမှာ ရပ်ဘို့ပြင်နေပါတယ်။ ဘယ်ဘူတာမှန်းလည်း မသိတော့ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ကျနော့လီးကို အမြန်ဆွဲချွတ်ပြီး မှန်တံခါးတခုဘဲ ပိတ်ထားတဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို အတွင်းက သံတံခါးတွေ ဆွဲချလိုက်ရပါတယ်။ သံတံခါးလဲပိတ်လိုက်ရော တွဲကလည်း ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်သွားပါတော့တယ်။ ကျနော်လည်း အမှောင်ထဲ မှာဘဲစမ်းပြီး အန်တီမမ နား ပြန်လာလိုက်ပြီး ခုနက စထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကို ပြန်စ ဘို့ လုပ်ပါတော့တယ်။ အန်တီမမ ကတော့ ခုနပုံစံအတိုင်းပါဘဲ ပုံစံ မပြောင်းသေးဘူးဗျ။ ကျနော်လည်း ခုနအတိုင်းဘဲ သူ့စောက်ဖုတ် ထဲကို လီးထိုးထည့်ပြီး ပြန် စ လိုးရော ကျနော်တို့တွဲတံခါးကို တဒုံးဒုံးနဲ့ တစုံတယောက်က လာခေါက်နေသံ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အနှောင့်အရှက်က များလွန်းနေတာနဲ့ ကျနော်လည်း တောက်တချက်ခေါက်ပြီး လီးကို ချွတ်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အစောတုံးက ချွတ်ထားတဲ့ ကျနော့ စွပ်ကျယ် ရယ်
ပုဆိုးရယ် ခုံနောက်မှီ တန်းပေါ်မှာ ချွတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးရယ်ကို အမြန်စွပ်လိုက်ပြီး တွဲတံခါးကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ တွဲ အ၀မှာက တံခါး ခေါက်နေသူက တွဲစောင့်ပါ။“စောရီးဆရာရေ၊ တာဝန်အရပါ၊ အားလုံးအဆင်ပြေရဲ့လားလို့မေးတာပါ။”“အင်း ပြေပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးက အိပ်ပျော်နေတာဗျ။ ခင်ဗျား တံခါးခေါက်တော့မှ လန့်နိုးသွားတာ။”“အဆင်ပြေတယ်ဆို၊ ရပါပြီ၊ စောရီးနော်ဆရာ၊”သူလည်းထွက်သွားရော
ကျနော်လည်း တွဲတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီး အထဲပြန်ဝင်လိုက်တော့ တွဲထဲက မီးဖြတ်ကနဲ လင်းလာပါတယ်။ အန်တီမမ က သူ့ဂါဝန်ကို လုံလုံချုံချုံ ဆွဲချလို့ ကုတင်ပေါ်ကဆင့်ပြီး ဒီဘက်ထိုင်ခုံဘက်ကို ပြောင်းထိုင်လိုက် လိုက်ပါတယ်။ “ဘယ်ရောက်နေပြီလည်းတောင်မသိဘူးနော်၊ ဆာတောင်နဲနဲ ပြန်ဆာလာပြီ။”“တောင်ငူလို့ထင်တာဘဲ မမ။ တခုခု ၀ယ်ပေးရမလား၊ မမ ဘာစားချင်လဲ၊”“ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်လေကွာ၊ ဒီကဘဲ လာရောင်းတဲ့အသည်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေတာဝယ်ကြတာပေါ့။”အန်တီမမ
က မှင်တော့တော်တော်သေပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ မသိသလိုမျိုး အေးအေး ဆေးဆေးဘဲ စကားတပြောပြောနဲ့ လာရောင်းတဲ့ဈေးသည်ဆီက ဆီထမင်းရယ် ငုံးဥပြုတ်ရယ်ကို ၀ယ်လိုက် ပါတယ်။ ကျနော်ပိုက်ဆံပေးမယ်လုပ်တော့ အပေးမခံပါဘူး။ သူဘဲပေးပါတယ်။ ရထားက ခနဘဲရပ်ပြီး ပြန်ထွက် ပါတော့တယ်။ အန်တီမမက ကျနော့ကို ငုံးဥပြုတ် အခွံ ခွာပြီးဆီထမင်းနဲ့ ကြွေးပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ သူများ ခုနကိစ္စကို တခုခုပြောလိုက်မလားလို့ ထင်နေပေမဲ့ တခွန်းမှမဟပါဘူး။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုပါဘဲ။ စားသောက်ပြီးတော့ ခနနေပြီးတော့ အန်တီမမက အိမ်သာခန၀င်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ထွက်လာပြီး အိပ်ယာ ပေါ် မှာ အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း အပေါ့သွားချင်တာနဲ့ အိမ်သာဝင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှဘဲ ခုနက သူ့ကိုလိုးထားတုံးက ပေနေတာတွေ ခြောက်နေတာကို သေသေချာချာ ဆေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်အပြင်ပြန်ထွက်လာတော့ တွဲကမှောင်နေပါတယ်။ အန်တီမမက တွဲမီးကို ပိတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ ဒီတခါတော့ ပြတင်းပေါက်နှစ်ထပ်လုံးပိတ်ထားလို့ တွဲက လုံးဝမှောင်နေပါတယ်။ ကျနော်လည်း စမ်းပြီး ကုတင် ပေါ် တက်လိုက်ပါတယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်လိုက်ရင်း အန်တီမမဘက် ကို လက်လှန်းပြီး စမ်းလိုက်တော့ လား လား…အန်တီမမက သူ့ဂါဝန်ကို ချွတ်ထားပြီး ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်လည်း အထူး ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ကျနော့ပုဆိုးနဲ့ စွပ်ကျယ်ကို ချက်ချင်း ချွတ်ပြစ်လိုက်ပြီး တိုင်ခုံဘက်ကို လှမ်းပစ်တင် လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ အန်တီမမ ကို ဖက်လိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း ကျနော့ကို ပြန် ဖက် ထားပါတယ်။ ကျနော်က ဖက်ထားရင်းက သူ့မျက်နှာကို လျှောက်နမ်းနေလိုက်ပါတယ်။ သူက
ကျနော့ အောက်နှုပ်ခမ်းကို ဖမ်းစုပ်လိုက်ပြီး အကြာကြီးနမ်းနေပါတယ်။ ကျနော့လည်း အရသာ တော်တော်တွေ့နေပြီး လီးက ချက်ချင်းကို တောင်လာပါတယ်။ ခနနေတော့ ကျနော်က နမ်းနေတာရပ်လိုက်ပြီး အောက်နဲနဲလျှော ဆင်းလိုက်ပြီး အခုန အချီတုံးက မေ့ထားခဲ့တဲ့ သူ့နို့ကြီးကို စ ပြီးစို့လိုက်ပါတယ်။ အစမှာ ကလေးတွေ နို့စို့သလို သူ့နို့သီးခေါင်းကို ငုံပြီး တပြွတ်ပြွတ်စို့နေလိုက်ပါတယ်။ ခနနေမှ သူ့နို့သီးခေါင်းကို လျှာနဲ့ ဖိဖိယက်ပြီး ကလိပေး ပါတယ်။ သူကတော့ ကျနော့ကို အတင်းဖက်ထားပြီး အင်း….အင်း….အင်း… နဲ့ ညည်းနေပါတယ်။
အန်တီမမက နို့စို့ခံနေရင်းနဲ့ ဖက်ထားတဲ့ လက်တဘက်က အောက်ဆင်းလာပြီး ကျနော့လီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးလေး ရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ် ပွတ်ပေးနေပါတယ်။ ခနနေတော့ သူက သူ့နို့ ကိုဆွဲချွတ် လိုက်ပြီး
သူ့ကိုယ်လုံးကို ပြောင်းပြန် လှည့်လိုက်ပါတယ်။ သူခေါင်းက ကျနော့ ပေါင်ကြားကို ရောက်သွားပြီး ကျနော့လီး ကို စပြီး စုပ်ပေးပါတော့ တယ်။ သူလီးစုပ်ပုံက ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ လီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး တ၀က် လောက်သွင်း လိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်လိုက်၊ ပါးစပ်ထဲကချွတ်ပြီး လီးတချောင်းလုံးကို လဥ ပါ မကျန်ယက်လိုက် ပြီးတခါ လီးကို ပြန်စုပ်လိုက်နဲ့ အကြာကြီးဘဲလုပ်ပေးမေပါတယ်။ လီးကိုစုပ်နေရင်းက တခါ လဥကို ယက်ပေး ရင်း စအိုဝကိုပါ ယက်လိုက်တာ ကျနော့မှာ တကိုယ်လုံးကြက်သီးတွေ တဖြင်းဖြင်း ထသွားပါတယ်။ ကျနော်က တော်တော်ကြာ ကြာ သူလုပ်သမျှ ခံနေပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ အားနာသလိုဖြစ်လာပါတယ်။ အဲတာနဲ့ဘဲ ကျနော့
မျက်နှာနားမှာ အဆင်သင့်ရောက်နေတဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို တချက်ဖမ်းယက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲဖက်လိုက်ပြီး
စောက်ဖုတ်ကြီးကို မျက်နှာ အပ်ပြီး တအားနမ်းလိုက်ပါတယ်။ နမ်းပြီးတော့မှ သူ့စောက်စိထိပ်ဖူးလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ယက်ပေးလိုက် စောက်စိ တလျှောက်လုံးကို ဖိယက်လိုက် တခါ သူ့စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိုးသွင်းလိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ သူ့စောက်စိကို နှုပ်ခမ်း ကြားမှာ ငုံပြီး တပြွတ်ပြွတ် စုပ်ပေးလိုက်ရင် သူက တအားကို ဖီးတက်လာပြီး ကျနော့ လီးစုပ်တာပါ ရပ်သွားပြီး သူ့ဖင်က ကော့ကော့သွားတတ်တော့ ကျနော်ကလည်း သူကြိုက်တတ်တဲ့ပုံစံမှတ်ထားပြီး ပိုပို လုပ်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ကျနော်က သူ့စောက်ဖုတ်ကို ဘေးတိုက်စုပ်နေရတာအားမရတော့လို့ သူ့ကိုယ်လုံးပေါ် မှောက်လိုက်ပြီး အပေါ်ကနေ ဆက်ပြီး ယက်လိုက်စုပ်လိုက်လုပ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကမှ တဆင့်ထပ်တက်ပြီး သူ့စောက် ဖုတ်ထဲကို ကျနော့လက်ညှိုးတချောင်းထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း စောက်ရည်တွေနဲ့ ရွှဲရွှဲစို နေပါပြီ။ ကျနော်ကလျှာနဲ့ သူ့စောက်စိကို အဆက်မပြတ် ယက်ပေးနေရင်းက လက်ကလည်း သူ့စောက်ခေါင်းထဲ မှာ မွှေလည့်ပေးနေပါတယ်။ သူ့မှာ ဘယ်လောက်အရသာတွေ့နေလဲတော့မသိဘူး သူ့စောက်ခေါင်းက
ကျနော့ လက်ညှိုးတချောင်းထဲကို တောင် ညှစ်ထားတာ ကျပ်ထုပ်နေပါတယ်။ကျနော့မှာ လက်ကိုတောင်မနဲလှုပ်နေရ ပါတယ်။ အဲဒီလိုဆက်တိုက်လေးလုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့မှ ကော့လန်ကော့လန်နဲ့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျနောလည်း မရပ်ဘဲ ဆက်တိုက် ဆက်လုပ်ပေးလိုက်တော့ သူ့ ဖင်ကြီးကော့တက်လာပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက သေးပန်းသလို
စောက်ရည်တွေပန်းထွက်လာပါတော့တယ်။ သေးမဟုတ်တာတာ့သေချာတယ်။ သေးနံ့ မနံဘူး ဗျ၊ ပန်းတာမှ အားပြင်းပြင်းနဲ့ အများကြီးပန်းထွက်တာပါ။ သူ့ပါးစပ်ကလည်း အ..အ…အ…အား…..အား… လို့ တအားကို ညှစ်ပြီးအော်နေပါတော့တယ်။ သူ့စောက်ရည်တွေက ကျနော့ပါးကို ဖြန်းသွားတာ နွေးကနဲဖြစ်သွား ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲလဲ တချို့ ၀င်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း သူအဲဒီလိုပြီးသွားတာကို ကြည့်ပြီး ကျနော့လီးထဲက ကျင်ကနဲကျင်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲမှာ ဘဲ ကျနော့ လရည်တွေကို ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး ဘေးစောင်းလေး တယောက်ပေါင်ပေါ် တယောက်ခေါင်းအုံးပြီး ခနအနားယူလိုက် ကြပြီး ခုန ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်
ကို ပြန်တည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တယောက်ကိုတယောက် ဖက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ ကျနော်အိပ်ရာက နိုးလာတော့ ကျနော့ ဘေးမှာ အန်တီမမ မရှိပါဘူး။ ရထားကတော့ အရှိန်မှန်မှန်ဘဲ ခုတ်မောင်းနေပါတယ်။ ကျနော့ကိုယ်ပေါ်မှာ ရထားတွဲစောင့်ပေးထားတဲ့ စောင် ကို လွှမ်းထားပါတယ်။ အိမ်သာရေချိုးခန်းထဲက ရေကျသံကြားနေရလို့ အန်တီမမ ရေချိုးနေမှန်းတော့ သိပါ တယ်။ ကျနော်လည်း ထပြီး ဘောင်းဘီတိုနဲ့ စွပ်ကျယ်ကို ပြန်ဝတ်ထား လိုက်ပါတယ်။ သံပြတင်းကို ဖွင့်လိုက် တော့ အပြင်မှာ မိုးစင်စင်လင်းနေပါပြီ။ နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၆ နာရီ ထိုးကာနီးပါပြီ။ ခနတွင်းမှာဘဲ ရထားက အရှိန်လျှော့လာပါတယ်။ သာစည်ကို ၀င်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ရထား အရှိန်နဲနဲလျော့သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘဲ အန်တီမမ ရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပါတယ်။ ခုတော့ ထမီနဲ့ ဘလောက်စ် အင်္ကျီနဲ့ ဖြစ်နေပါပြီ။ အန်မယ်။ ဘရာစီယာတွေဘာတွေလည်း ၀တ်ထားတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ကျနော့ကို “မောင်လေး မင်းလည်းလန်းသွားအောင် ရေချိုးလိုက်ပါလား” တဲ့။“ဟုတ်ကဲ့မမ” ပေါ့။ကျနော်လည်း
တဘက် ကိုဆွဲလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ရေချိုးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ရထား ကလည်း သာစည်ဘူတာမှာရပ်ပါတော့တယ်။ ရေချိုးခနိးထဲက ထွက်လာတော့ အန်တီမမက ညက သူပန်းထား လို့ စိုရွဲနေတဲ့ အိပ်ယာခင်းကို နောက်တထည်နဲ့ လဲထားပြီးပါပြီ။ နံရံတွေကိုလည်း သုတ်ထားပုံရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ညက နံရံတွေပါ ပန်းခံထိပုံရပါတယ်။ တွဲထဲမှာက ကုတင်နှစ်လုံးစာ အခင်းတွေ ပေး ထားတော့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း ပြတင်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး ဗိုက်ဖြည့်ဘို့ ကြည့် လိုက်ပါတယ်။ မမက ပလာတာနဲ့ လဘက်ရည် ၀ယ်တော့ ကျနော်လည်း ဒါဘဲ စားရတာပေါ့။ ဒီတခါတော့ ပိုက်ဆံ ပေးဘို့ လည်း မကြိုးစာတော့ပါဘူး။ သူက လက်ခံမှာမဟုတ်မဲ့အတူတူ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ ရထားက သာစည်ဘူတာ မှာတော့ နဲနဲ ကြာကြာရပ်ပါတယ်။ ညောင်ရွှေဘက်ဆက်သွားမဲ့ တွဲကို ဖြုတ်နေပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ရထားပြန်ထွက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ နားလည်မှုရသွားပါပြီ။ မီးဖွင့်ထားလို့ကတော့ အမှောင်ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ မပြောကြေးပေါ့။ ရတယ်လေ ခုတော့လဲ တစိမ်းတွေဘဲပေါ့။ ရထား ထွက်ပြီး နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ အန်တီမမ က “မောင်လေး အိပ်ချင်သေးလား ” တဲ့။ ခပ်တည်တည်မေးတာပါ။
မပြောဘဲနဲ့ သဘောပေါက်ရမှာလေ။ လိုးချင်သေးလားလို့မေးနေတာကို။ ကျနော်က ဘာကောင်မို့လို့ မအိပ်ချင်ဘူးလို့ ပြောရမှာလည်း။ “အင်း အိပ်ချင်သေးတယ် မမ၊ အိပ်လို့မ၀သေးဘူး” လို့ ခပ်တည်တည်ဘဲပြောလိုက်တာပေါ့။
ပြောပြီးပြီးချင်း ဘဲ ပြတင်းပေါက်တွေကို ကျနော် ထပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနောတို့က အမှောင်ထဲမှာ မှ အလုပ်ဖြစ်ကြတာလေ။ အန်တီမမ ကတော့ ကုတင်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ။ တွဲထဲကမီးကိုပိတ်လိုက်တော့ တွဲကလည်း ပြန် အမှောင်ကျသွားပါတော့တယ်။ ဒီတခါတော့ တခါထဲ အန်တီမမနား တန်းကပ်သွားပြီး သူ့ကိုဖက်လိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း
ပြန်ဖက်ထား တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဖက်ထားရင်းက ကျနော်က “မမ ညက အဆင်ပြေလားဟင်” ဆိုတော့ သူက ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ငြိမ်နေပါတယ်။သူဒီအကြောင်းတွေကို
မပြောချင်ဘူးဆိုတာသိလိုက်ပါပြီ။ လုပ်ဘဲလုပ်မယ် မပြောဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ရပါတယ်၊ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းကောင်း ၀ါးနေရရင် ပြီးတာဘဲလေ။ စကားလျှောက်ပြောပြီး ရှိနေတဲ့ အချေအနေကောင်းလေးကိုတော့ အပျက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ကျနောလည်း ဖက်ထားရင်း က သူ့ကို နမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အင်္ကျီကို
ခေါင်းပေါ်ကျော်ချွတ်လိုက် ပါတယ်။ အင်္ကျီကျွတ်သွားတော့ ဘရာစီယာ အပေါ်ပိုင်းကနေ သူ့ ရင်အုံမို့မို့ကြီးကို ဖြေးဖြေးလေး စုပ်နမ်း လိုက်ပါတယ်။
အန်တီမမ က နောက်ဘက် လက်ပြစ်ပီး သူ့ဘရာစီယာ ချိတ်ကို ဖြုတ်ပြစ် လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့လည်း သူ့နို့ကြီး နှစ်လုံးက ကျနော့ မျက်နှာရှေ့ ရောက်လာတော့တာပေါ့။ ကျနော်လည်း သူ့နို့တွေကို တလုံးစီ စို့ပေးလိုက် တလုံးကို စို့နေရင်း တခြားတလုံးကို ပွတ်ပေးလိုက် နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ ကြားမှာ ဖြေးဖြေးလေးချေပေးလိုက်နဲ့လုပ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ ညတုံးကလို အင်တိုက်အား တိုက် သိပ်မလုပ်တော့ဘဲ မှိန်းပြီး ဇိမ်ဆွဲနေလိုက်ပါတယ်။ လိုးတော့လဲ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လေး လှေကြီး ထိုး ရိုးရိုး ဘဲ အကြာကြီးဆွဲလိုးနေလိုက်ပါတယ်။ မှန်မှန်လေး လိုးနေရင်းက ကုန်းပြီး သူ့နို့ကို စို့စို့ပေးလိုက်တော့ သူ့မှာ တအင်းအင်းနဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ တော်တော်ကြာကြာလေး လိုးနေရင်းက လိုးရတာ နဲနဲပျင်းလာပါတော့တယ်။
သူ့ဘက်ကလည်း နဲနဲ စိတ်မပါတော့သလိုဖြစ်လာပြီး တာဝန်ကျေခံနေသလိုမျိုး ခံစားလာရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ဘဲ ကျနော်လည်း ကုန်းထပြီး သူ့ပေါင်ကြားမှာ စောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး ကျနော့လီးကို တဆုံးစောင့်ထိုးသွင်း လိုက်တော့ မှ သူက အင့် ကနဲ တချက် အသံထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်း တဖုံးဖုံးနဲ့
မညှာ မတာကို အသားကုန်ဆောင့်ပါတော့တယ်။ ဒီတခါတော့ သိပ်မကြာလိုက်တော့ပါဘူး ကျနော်လည်း မထိမ်း တော့ဘဲ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲမှာဘဲ ပြီးလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးလဲပြီးရော ကျနော်လည်း ဘေးကို လှဲချလိုက်ပြီး အိပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာ အန်တီမမဟာ အ၀တ်အစားလဲ မိတ်ကပ် နှုပ်ခမ်းနီ ဆိုးပြီး ဘေးက ထိုင်ခုံမှာ အခံ့သားထိုင်နေပါတယ်။ သံပြတင်းကို မတင်ထားပြီး မှန်ပြတင်းကိုဘဲ ချထားတော့ တွဲတခုလုံးက လင်းထိန်နေပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးပေါ့။ အပြင်ကိုကြည့်လိုက် တော့ နေတောင် တော်တော်မြင့်နေပါပြီ။ မန္တလေး ၀င်ကာနီးနေလောက်ပါပြီ။ ကျနော်လည်း ခပ်တည်တည်ဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးနဲ့ ထလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းဝင်လိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းမှာ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပြီး မနေ့က အ၀တ် အစားတွေကိုပြန်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခတ်တည်တည်ဘဲ ကုတင်ကို ပြန်သိမ်းပြီး
အန်တီမမ ရှေ့မှာ သွား ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ စကားလဲ မပြောဖြစ်ပါဘူး။ အန်တီမမက အပြင်ကိုဘဲငေးကြည့် နေပါတယ်။ ခုမှနောင်တတွေရနေလားတော့ မသိပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ နောင်တရဘို့နေနေသာသာ သူ့ကို
ထိုင်ကြည့်နေ ရင်း ညက လိုးခဲ့တာတွေ စိတ်ထဲ ပြန်ပေါ်လာပြီး လီးကပြန်တောင်နေပါပြီ။ ဒီတခါတော့ သူ့ကို မှောင်ထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ အလင်းထဲမှာလိုးချင်နေတာပါ။ ကျနော်လည်း ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်တွေထုတ်နေမိပါတယ်။ အချိန်ကလည်း သိပ်မကျန်တော့ အတင်း ဆွဲဖက်ပြီးလိုးရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ခနနေတော့မှ အကြံတခုရလာပြီး ကျနော် ထိုင်ရာကထ လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ထလိုက်တော့ သူက မော့ကြည့်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ခပ်တည် တည် နဲ့ ထိုင်ခုံနဲ့ အိမ်သာကြားကနေရာလပ်ဘက်ကို ထသွားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာက အပြင်ကကြည့်ရင် မမြင်နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်က “မမ၊ ခန” လို့ အန်တီမမ ကိုခေါ်လိုက်တော့ သူလည်း လှမ်းကြည့်ပြီး ထလာပါတယ်။ ကျနော့နားရောက်လာတာနဲ့
ကျနော်က သူ့ကို တဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်ပါတယ်။ သူလည်း ရုတ်တယက် ကြောင် သွားပုံရပါတယ်။ သူ့ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတာနဲ့ သူ့နောက်မှာ ကျနော်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ့ထမီကို ဆွဲမ လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတဆက်ထဲဘဲ သူ့ဘောင်းဘီပေါ်ကနေဘဲ သူ့ဖင်ကြားကို ကောက်ယက်လိုက်ပါတယ်။ အန်တီမမက ရုံးမလို့
ကျိုးစားပါသေးတယ်။ ကျနော်က လက်တဘက်နဲ့ အတင်း သိုင်းဖက်ထားပြီး နောက် တဘက်က
သူ့ဘောင်းဘီ ကို ဘေးဆွဲဖယ်ပြီး သူ့စအိုနဲ့ စောက်ဖုတ်ကို မှီသလောက်အတင်း ဖိယက်နေတော့ သူလည်း ဆက်မရုံးတော့ဘဲ ညိမ်သွားပါတယ်။ ယက်နေတုံးမှာဘဲ သူ့ထမီကအောက်ပြန်ကျလာပြီး ကျနော့တကိုယ်လုံး သူ့ထမီထဲရောက် သွားပါတော့တယ်။ ဘုန်းကတော့ ဘယ်လောက်နိမ့်သွားလဲမသိဘူး၊ ဒီအချိန်မှာတော့ ဒါတွေလဲ ဂရုမစိုက် တော့ပါဘူး။ သူ့ကျောကုံးကို နဲနဲတွန်းလိုက်တော့ သူလဲ သဘောပေါက်သွားပြီး လက်ကထိုင်ခုံ နောက်မှီကို ကိုင်ထားပြီးကုန်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့မှ သူ့စောက်ဖုတ်တခုလုံး နောက်ကိုပြူထွက်လာပါတော့ တယ်။ သူ့ဘောင်းဘီအသားကလည်းပျော့တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်က သူ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကို နဲနဲ ကား လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ယက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူလည်း အရသာတွေ့ လာပုံ ရပါတယ်။ သူ့ဖင်ကြီးက ကော့လန်ကော့လန်ဖြစ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ရထားကလဲ မြို့ထဲ ၀င်လာနေပြီ ဆိုတော့ အရှိန်တော်တော်လျော့လာပါပြီ။ ဆက်ယက်ချင်နေသေးပေမဲ့ အချိန်မရှိတော့လို့ ကျနော် အယက်ရပ်လိုက်ပြီး ထလိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ ကုန်းမြဲကုန်းလျှက် အကုန်းမပျက်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ပုဆိုးကို ခေါင်းပေါ်ကနေ နောက်ကို ကျော်ချ၊ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အမြန်ချွတ်ချပြီး ကျနော့ရဲ့တောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးကို သူ့စောက် ဖုတ် ထဲကို ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ တဆက်ထဲ တဖုံးဖုံးနဲ့ကို ဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်။ လိုးနေရင်းနဲ့ ပြတင်းပေါက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင် အပြင်မှာ လူတွေကိုတောင်မြင်မြင်နေရပါတယ်။ သူကတော့ ကုန်းနေတော့ ထိုင်ခုံနောက်မှီနဲ့ကွယ်နေပြီး မမြင်ရပါဘူး။ ကျနော်က အဲဒီလို လူတွေကိုမြင်နေ ရလေလေ ပိုလိုးကောင်းလေလေပါဘဲ။ အသားကုန် ဆောင့်လိုးနေတော့ သိပ်ကြာကြာမခံဘဲ ပြီးချင်လာပါ တယ်။ အန်တီမမကလဲ နောက်ကနေဆောင့်လိုးနေတော့ ပိုထိပြီး တအင့်အင့် တအီးအီး နဲ့ အသံတွေထွက်နေ ပြီး အရသာတွေ့နေပုံတော့ရပါတယ်။ ကျနော်က အချိန်ရသလောက်တမင်ထိမ်းပြီး ဆွဲလိုးနေရင်းက ရထားက အရှိန်တော်တော်ကြီးကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးတလိမ့်ချင်းလိမ့်နေပါပြီ။ အဲဒီတော့မှ ကျနော်လည်း လိုးရှိန် ကို မြှင့် လိုက်ပြီး အသားကုန်ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်တော့မှ တကိုယ်လုံး တုံတက်လာပြီး ပြီးသွားပါတော့တယ်။ကျနော့လီးကို အန်တီမမစောက်ဖုတ်ထဲကနေ ဆွဲချွတ်လိုက်တာနဲ့ ရထားကလဲ ရှူးကနဲ မြည်ပြီးရပ်ပါတော့ တယ်။ အန်တီမမကတော့ ဘောင်းဘီကိုနေရာပြန်ချပြီး ထမီကို ပြင်ဝတ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ ကျနော်ကလည်း ကြမ်းပေါ်ချွတ်ချထားတဲ့ ဘောင်းဘီကိုကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး လည်ပင်းစွတ်နေတဲ့ ပုဆိုးကိုပြန်ဝတ်လိုက်တော့ အရာအားလုံးဟာ အိုကေမှာစိုပြေသွားပါတယ်။ မောတော့နဲနဲမောနေတာပေါ့ဗျာ။ အန်တီမမက ကျနော့ထက် အရင် ရထားပေါ်ကဆင်းသွားပြီး အောက်ကနေ “သွားမယ်နော်” တဲ့။ --------------------------------ပြီးပါပြီ။---------------------------------- Posted by